Wanano neKurambana Chikamu 2
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Wanano neKurambana Chikamu 2
Hurongwa hwaMwari chaihwo hwaive hwekunatsa Kusika kwake nekuunza vanhu vane hupenyu husingaperi panyika.
Izvi zvaisaitika nebonde sezvo hupenyu husingaperi hunobva paMunhu mumwechete, Jesu Kristu.
Eva aifanira kuunza mwana akazvarwa nemhandara Jesu. Aifanira kuzokurira munyika isina zvivi umo maaisazofa. Aizodaidza vatsvene vose kubva kuguruva renyika ipapo nyika yaizozadzwa nehuwandu chaihwo hwevanhu, vose vakazadzwa nehupenyu husingaperi.
Asi Mwari aidawo kuti vanhu vakwanise kuzvisarudzira kwete kuti vararame nekuda kwakaberekwa kuri mavari sezvinoita mhuka.
Mubairo wakaripwa pakuzvisarudzira ndewekuti kunoda kuti pave nezvinhu zviviri zvekuti vanhu vasarudze kubva kwazviri. Kana usingakwanisi kusarudza kubva pazvinhu zvinoreva kuti hauna kodzero yekuzvisarudzira uye kuti uri kurarama muhudzvanyiriri hunongokupa sarudzo imwechete. Sarudzo imwechete yaive naAdamu nemukadzi wake yaive yekuisa zvose mumaoko aMwari kusvikira azivisa kubereka kwemhandara, uko kwaisazivikanwa nezvako naAdamu naEva. Ndiko kunonzi kurarama nekutenda. Kusiya zvose mumaoko maMwari pachinzvimbo chekuedza kumubatira nepfungwa dzedu dzine miganhu. Sarudzo yechipiri yaive yekutevedzera nzira inoshandiswa nemhuka sezvo dzichiberekana nekusangana kunotaridzika kunge ndiyo yega nzira yekuunza hupenyu panyika, maererano nepfungwa dzedu isu vanhu dzakapihwa miganhu. Saka Adamu naEva vaive nenhengo dzinovatendera kusangana zvekuti vaikwanisa kuenda nenzira isiriiyo kana vasarudza kudaro. Zvinosuwisa, vakatora iyi nzira yechipiri yekutevera kutaura kwenyoka, senyoka, yaivewo mhuka, yaiziva zvose pamusoro pekuunza hupenyu nekusangana kwaiita mhuka. Saka zvakadaro Eva aive asisiri mhandara kuti agokwanisa kuunza Jesu panyika ari mhandara.
Nekuona kuti hurongwa hwake hwakanaka hwehupenyu husingapere hwaive hwakundikana, Mwari aive akufanira kutendera kuti vanhu vaunze hupenyu kupfurikidza bonde.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati, Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako (kamwechete. Eva aifanira kuita mimba yeMweya Mutsvene kuti apone Jesu);
Zvino Mwari aizotendera kuwanda kwevanhu kupfurikidza bonde saka Eva aizobata mimba kakawanda kuti aite vana vakawanda vaizowanana.
Nhasi uno hazvisi nyore nekuti vana vari mumhuri imwechete vane zvakafanana zvisina kukwana zvizhinji mumajini avo ekuberekwa nawo. Kana hanzvadzi nehanzvadzi vakaroorana nhasi, zvisina kukwana izvi zvinozowandisa muvana vavo. Asi Adamu naEva vaive vakagadzirwa naMwari saka vaive vasina majini asina kukwana. Zvaizotora mazera akawanda kusakwana kwemajini kusati kwapindira murudzi rwevanhu. Mvura yaNoah isati yauya vanhu vairarama kwenguva refu kwazvo saka zvakadaro kusakwana kwemajini yaisava nyaya huru. Kumashure kweMvura yaNoah nguva yairarama vanhu yakadzoka kuva duku zvaishamisa zvekuti nyaya yemajini yakabva yasimuka nekuti vanhu vaive vasisina kusimba sezvavakanga vari pakutanga.
Onai chinhu chakakosha. Kubata mimba zhinji kupfurikidza bonde waive chikamu chemubairo wezvivi zvaEva. Saka aive asina kunzi achaunza hupenyu kupfurikidza bonde.
Uchabereka vana uchirwadziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako.
Kusimbisa kusafara kwaMwari nenzira iyi yekuunza vana panyika, Mwari akavimbisa kuita kuti kuzvara kuve kwakaoma. Nanhasi zvichiri zvakadaro, nanaamai vari kurwadziwa nemimba vanotoda vananyamukuta vanotodawo ruzivo ruzhinji uye kujaira basa ravo. Basa ravo harisi nyore.
Kuwanda kupfurikidza bonde kwaizoramba kuchiunza avo vaizoramba vachitenda muna Mwari voponeswa naizvozvo zvaive zakanaka asi zvaizova zvakaipa kune avo vanozoramba Mwari vorasika.
Pakutanga, muTestamente Yekare, nekuti Adamu naEva vakatevedzera zvaiitwa nemhuka zvekubereka nebonde, Mwari akatendera vanhu kurarama nenzira iyi yemhuka nekuti mhuka dzinoita barika nemukono umwechete uri nehadzi zhinji paboka. Mhuka dzinorarama nezvakaberekwa zviri madziri mhuka hadzi dzinorarama nguva yadzo zhinji dzisina shungu yebonde. Saka inodzorwa naMwari kuti hakuzvarwi mhuka dzakawandisa. Asi muvanhu, kuzvisarudzira hakutenderi kuti kuda bonde kudzimwe. Saka kuzvisarudzira kukasangana pabonde kunoita kuti vanhu vawandise zvakadarika mwero saka zvinokonzeresa kutambura nemarwadzo kuvanhu vazhinji. Tisingataure zvirwere zvese zvepabonde zvinozouya nekuita uku sezvo kuzvisarudzira kunoita kuti vamwe vaite zvebonde kunze kwewanano. Zvino chinhu chinorwadza chekuita kwekubara vana, chinoshungurudza vakawanda chero vananyamukuta, uye chinova yeuchidzo isingagumi yekuti bonde raive risiri pahurongwa hwaMwari hwekutanga kumunhu. Mubairo wekupedzisira wekuita uku ndewekuti unozivisa munhu wese azvarwa nenzira iyi, kuti achafa nerimwe remazuva. Zvisikwa zvisingawanzwi nebonde hazvifi . Zvinofanira kudyiwa nezvimwe zvipuka. Asi chipuka chese chinowedzerwa nebonde chinofa. Saka bonde rinoita kuti chinhu chese chinorarama chife. Bonde rinounza chete hupenyu hwechinguvana.
Kana murume muTestamente Yekare airarama pasi pemurairo wechiJuda aitenderwa kuita vakadzi vakawanda. Asi aifanirwa kurarama asina chipomerwa pasi pemurairo. Hakuna munhu akabudirira pakuita izvi. Pasi pengoni panorarama murume umwe nemukadzi wake mumwechete. Asi ngoni chisungo chakanaka nekuti chakazotipa Muponesi, Jesu Kristu.
Kana munhu akaita sungano yekuti kusvikira taparadzaniswa nerufu akarambana neumwe wake akaroorazve, anenge ari nevakadzi vaviri. Izvi zvinomuisa pasi pemurairo. Asi murairo haukwanisi kumuponesa, saka kana achida kuenda kudenga anofanira kurarama asina kana chitadzo chimwe, asi hakuna munhu anozvigona. Wanano yake yepiri inongori hupombwe hwaaitira mudzimai wake wekutanga. Saka anenge ari padambudziko guru naMwari. Munhu mumwechete ndiye akakwanisa kugonera Murairo anova Jesu. Saka, maererano neMurairo, anokwanisa kuwana vanhu vakawanda sekuda kwake. Ndiye ega zvakare asingade Muponesi. Nekuti wanano yake nesu ndeyepamweya nekunge tazvarwa patsva pamweya kwete panyama, mudzimai wake anosanganisa varume nevakadzi vakazvarwa patsva.
Asi muTestamente Itsva hurongwa hukuru hwaMwari hwaive hwekudzosa vanhu kuhurongwa hwake hwekutanga hwaakaita mumunda weEdeni, wanano pakati pemurume umwechete nemukadzi mumwechete pasina kutaurwa nezvekurambana.
Mwari apa vave kutendera bonde mukati mewanano asi kwete vanhu vasati vawanana kana kuti kunze kwewanano.
Kana munhu akapikira wanano zviri pamurairo, haizoputswa pamusoro pechero chikonzero zvacho kusvikira vaparadzaniswa nerufu. Eva akatadza asi Adamu haana kumuramba. Murume nemukadzi vanokwanisa kusagara pamwechete asi havangarambane nekuti hakuna chinhu chinonzi kurambana nekuroorazve.
Eva akaparadza hurongwa hwaMwari nekutadza kuramba ari mhandara kusvikira Mweya Mutsvene wamushanyira. Saka Mwari aitarisira mukadzi kuti ave ari mhandara paanochata. Izvi zvinotaridzwa nerokwe rake jena.
Mwari akapa mukadzi humhandara nekuti kuchena kwake kwakakosha pakati pake naMwari. Mwari haadi dzokororo yechivi chekutanga.
Kana asisiri mhandara, akasareurura asati awanikwa nemurume wake, kupika kwake ndekwenhema hakungasungwe. Kana murume wake akazviziva anokwanisa kumusiya sezvo paive pasina chokwadi pasungano yavo. Kana akaroorazve, anofanira kuroora mhandara. Asi uku hakusi kuroora kwechipiri nekuti kupika kwekutanga kwaive kwenhema saka hapana kuitika sungano. Kana, nerumwe rutivi akasarudza kumuregerera akaramba achigara naye hapasisina chivi chakavanzika chingakonzerese kuti titi wanano haina kusunganidzwa saka kupika kwavo vose kunobva kwasunganidzwa pavari vose.
Chekutanga ngatitii barika harisisiri kutenderwa nhasi uno.
MVURA .KUBVA.PADOMBO_ PHOENIX.AZ THURSDAY_55-0224
E-50 … Hagar, imwe nguva , aive nekamwana kaive nenyota. Kaive kakutofa. Akashaiwa kuti sei mambokadzi vake vaaibatira, Mai. Abrahama, Sara, sei vakamubata mabatiro iwayo. Aive pachokwadi, mushandi pamberi pavo. Pamutemo (barika raitenderwa), aive awanikwa naAbrahama, pamutemo sezvaidiwa.
SIMBA RINOSHAMISA_ OWENSBORO.K SUNDAY_ 56-0129
E-47 Ndichitaura nemumwe munhu riwe zuva pamusoro pebarika. Ndakati nyika yose ingadai iri nani dai yaiita zvebarika. Ingadai. Tisu tiri nyika iri pamusorosoro pene zvekurambana, kuroora nekuroorana, kuroora nekurooresana. Nekuti tinoedza kuti varume vemunyika vararame nedzidziso yechiKristu, asi haukwanisi kuisa hunhu hwehwayana munguruve. Barika ringadai rakanaka kwavari. Mungatadze kuzvitenda asi Mwari angadai achitarisa barika akariregerera nekukasika pane zvaangadai achiita...
Zvino rangarirai, musati ndinotenda kubarika; handitendi mariri. Ndi …?... Mwari akati.... Mosesi akati... VaFarise vakati kuna Jesu, “Nei Mosesi akaraira kupa rugwaro rwokurambana?”
Akati “Nokuda kwehukukutu hwemoyo yenyu”. Handiti. Asi zvaive zvisina kudaro kubva pakutanga, hazvizova zvakadaro zvakare. Mwari akazviita nokuda kwehukukutu hwemoyo yavo.
SVONDO RECHIMAKUMI MANOMWE RADANIERI_ JEFF.IN DA 89-141 SUNDAY- 61-0806
209 Koti yekurambana yeAmerica inopa tsamba dzekurambana nevakadzi vedu kukunda pasi rese. Kuzvidzora munyika medu kushoma, uye kurambana, kukunda zvakuri muFrance nemuItaly, uko chipfambi chazara mumigwagwa saka ..... Asi vangori pfambi; vedu vakadzi vakaroorwa vari kuedza kugara nevarume vakawanda, nevarume vakaroora vari kuedza kugara nevamwe vakadzi.
Munyika dzine barika, zvirinani zvakapetwa zvuru . Asi, barika rakashata; tinozviziva.
MuTestamente Yekare, pasi pemurairo, murume anokwanisa kuita vakadzi vanodarika mumwechete. Asi kwete nhasi uno. Calvari yakatidzosera kuhurongwa hwaMwari hwekutanga, murume mumwe mukadzi mumwe.
MBEU. HAIGARI. NHAKA. PAMWE. NEHUNDI_JEFF.IN V-6 N-4 CHINA 65-0218
47 Mumwe, ainzi Hagai, aive mushandi wemudzimai wake; mudzimai aidadisa akanaka aibva kuIjipita aive atorwa kuIjipita kuti amushadire, kuti ave mubatsiri wemudzimai wake. Uye Sarah, nekufunga kuti Mwari aisazokwanisa kuzadzisa zvaakavimbisa kuti zvive chokwadi, akaudza Aburahamu kuti atore Hagai, mubatsiri wake, kuti amuroore, (nekuti barika raitenderwa mazuva iwayo) kuti amuitire mwana; zvaive zvarongwa zvakadaro naMwari, kuti aizoita mwana kupfurikidza Hagai. Asi tinozoona kuti zvaive zvisiriizvo.
MBEU HAIGARI. NHAKA. PAMWE. NEHUNDI_ JEFF.IN V-6 N-4 CHINA 65-0218
70 Onai Sara, ruva rine mbeu, iro rudzi rwaJuda rwakabva pariri. Kubva , kuna Sara, kwakauya Isaca; kubva kunaIsaca, kwakauya Jakobo; Jakobo akaunza marudzi; uye kupfurikidza marudzi akaunza nyika.
71 Maria, kutenda kwemhandara, kunounza Mbeu yeShoko yakaitwa nyama, yechokwadi. Mazviona?
Vakadzi vatatu, vakadzi vatatu vakashandiswa pakutakura mbeu iyi. Mumwe wavo aitove mhombwe, iri pasi pebarika; wechipiri aive mukadzi akasununguka; Wechina aive mukadzi asina kubvira aita zvebonde zvachose, asi nekutenda akabvumira Shoko raMwari. Hagai, Sara, vose Sara naHagai, vaiita bonde, asi Maria aive mhandara, nesimba reShoko rakavimbiswa naMwari. Ndizvo chaizvo.
Kunyangwe pakatenderwa barika naMwari pasi pemurairo, zvaive zvakangoipa. Mwari akaregerera dambudziko iri muTestamente Yekare asi kwete muTestamente Itsva. Jesu ndiye Mwenje akauya kuzobuditsa pachena miganhu yaiiswa neMurairo, kwete kuzovhariridza chivi chehupombwe. Hupombwe ndihwo hwaiva chivi chekutanga. Hakuna nzvimbo yahwo nhasi. Chivi chakaipisisa kuti munhu ave nevakadzi vanodarika mumwechete.
KUROORANA. NEKURAMBANA._ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
202 Zvino munoona nhasi, “kumashure” kwemavambo, chaive chimwe chinhu chakaziviswa. Iyezvino izvi zvichakutyisai. Maneta here? [chaunga chinoti, “Kwete”-Ed] Chingogadzikikai zvishoma.
203 Zvino kana sungano yakaitwa pakati pemurume nemukadzi, kupfurikidza bonde, imwe sungano pamwechete, (kwete sungano yekutanga, asi imwe sungano) zvino chii chaziviswa? Barika, pazvose. Zvino kumashure kwemavambo, barika rakaziviswa kwese kuvanhu nekumhuka; kumashure kemavambo, kutadza. Zvino Mwari, pamusoro pazvose, akaisa maitiro matsva zvakare, ebonde. Mwari akasika vanhu vekutanga pasina bonde. Munotenda mune izvi here? [ Ungano inoti “Amen”-Ed.] Iyi ndeimwe sungano nemasikirwo akaitwa zvinhu, akazviisa neimwe nzira, bonde. Sungano yechipiri: murume mumwe, vakadzi vakawanda; mukono mumwechete wemhembwe neboka rese resheche. Ndizvo here? Bhuru rimwe nedanga rese remhou, hadzi; jongwe rimwechete neruvanze rwese rwetseketsa. Ndizvozvo here? Davidi mumwechete, mumashure memoyo wake , nemadzimai mazana mashanu. Nevana zana vaakaberekerwa, mugore rimwehete, nevakadzi vakasiyana, murume akadiwa naMwari. Soromoni mumwechete nemadzimai chiuru. Asi tarirai zvino, zvaive zvisina kudaro pamavambo, asi zvino kwave “kumashure” kwemavambo. Mukadzi akaita izvi, akava zvaari nhasi uno. Mazviona?
Hurongwa hwaMwari hwekutanga hwaisasanganisira bonde. Eva aizobata mimba yaKristu nekubereka ari mhandara. Aizokura odaidza vanhu vake vose kubva kuguruva renyika. Nyoka yakanyengera Eva kuti abereke kupfurikidza bonde. Bonde yaive nzira yemhuka chete kuti dziwande. Mukono mumwechete wemhuka nehadzi zhinji i.e. barika.
Kubvira pakatambira Eva nzira yemhuka yekuberekana, Mwari akabva aisa nzira yemhuka yebarika kuvanhu zvakare. Asi izvi zvakazoitika kumashure kwekukanganisa. Hwaive husiri hurongwa hwaMwari sezvo aive aita mudzimai mumwechete kuitira Adamu. Kristu akauya kuzotidzikinura kuti tidzokere kumavambo, murume mumwechete nemukadzi wake mumwechete sezvazvaive naAdamu naEva. Dai Mwari aida barika angadai akaitira Adamu vakadzi vakawanda. Barika chaive chiitiko chekanguvana chakaitika muTestamente Yekare nekuti Eva aive atenda kubereka nenzira yemhuka inova bonde.
230 Zvino munoona kuna VaKorinte vekutanga 7:10 onai Pauro akaraira mukadzi aive , aive aramba murume wake, kuti arambe achigara asina murume kana kuti adzokerane nemurume wake, kwete kuroorwazve. Anofanira kuramba asina murume, kana kuti adzokerane nemurume wake. Aisakwanisa kuroorwazve. Iye aifanira kuramba asina kuwanikwa, asi onai haana kubvira ataura pamusoro pemurume. Mazviona, hamungaite kuti Shoko rinyepe. “Kubva pakutanga,” murairo webonde nebarika. Parizvino, Shoko raMwari rinofamba nechokwadi nemaitiro aMwari, rinofamba richienderera mberi.
231 Tarirai kuti chikoro chimwe chakaenda kumabazuva, chimwe chikaenda kumadokero, pazviri? Munofanira kudzoka kuchokwadi kuti muone kuti chimbori chii.
“Haangawanikwe zvakare. Iye anofanira kurarama asina kuroorwa, asi, tarirai haana kubvira ataura pamusoro pemurume”.
Mukadzi akarambwa haakwanisi kuwanikwa zvakare.
Murume akaroora zviri pamurairo haakwanisi kuramba nekuroorazve nekuti angaputse chirangano chake chekutanga.
Asi Mwari haana kuita murairo wakarambidza murume kuti haangaroori zvakare nekuti kune nyaya imwechete inoita kuti atenderwe kuroorazve ndeyekuti kana akaziva kuti mukadzi haasi mhandara kumashure kwemuchato.
Pamusoro paizvozvo chirangano chake chaive chenhema uye chaisamusunganidza naye. Anokwanisa kugara naye zvinobva zvaita kuti wanano yavo ive chitsidzo chakasugwa pakati pavo vose kana kuti anokwanisa kumurasha uye kana akaroorazve, anofanira kuroora mhandara.
232 Ndiyo yaingove nzira yesungano chaiyo naMwari kubva pakutanga. Chekutanga, mavambo asati asvika, kubva pamavambo paingove neumwechete kuumwechete. Mumashure mekupindira kwechivi, kwakaitawo murume mummwechete ane vakadzi vazhinji; zvaifamba nenzira iyoyo, mhuka yega yega, nevanhu nemuviri unoora ndewemhuka. Tiri nyama inoora, tinozviziva izvozvo, tese, tarirai, zvose zviri kuenderera mberi mukusika kwaMwari.
Adamu naEva. Murume mumwe nemukadzi mumwe kutadza kusati kwapindira. Barika rakatenderwa kumashure kwekukundikana.
Jesu haana kutidzikinura kuti tienderere mberi nekutadza kwebarika sezvo zvaiitika munguva yake zvisinei.
Akatidzikinura kuti tidzokere kuhurongwa hwaMwari hwaive mumunda weEdeni, murume mumwe nemudzimai mumwechete.
KUROORANA. NEKURAMBANA._ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO 65-0221M
236 Zvino, pava nemudzimai wechokwadi, mudzimai wechokwadi, mhandara, anoroorwa nemurume wake, orarama, uye chinhu chakaropafadzwa kumurume iyeye. Kana Mwari vaikwanisa kupa mwanakomana wavo chinhu chiri nani kupinda muKadzi, angadai akamupa ichocho.
237 Asi akagadzirwa kuva chiitiko chebonde, uye hakuna imwe mhuka yakagadzirwa yakadaro. Hakuna chimwe chipuka panyika chakasikwa zvakadaro. Ndicho chikonzero muchiona barika, nekuda kwaizvozvo. Ndizvo zvakariunza.
Kuwira pasi kwekuita kwebonde pavanhu isarudzo yedu. Kunotendera vanhu kuti vavhure misuwo yekutadza kukuru. Kutadza kuzhinji kuri mumarudzi evanhu kunorerekera kuzvinhu zvakanangana nebonde zvakanyanya.
Chivi chekutanga chakauya kupfurikidza bonde. Ndiwo muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
Ruzivo rwezvekusangana kwenhengo dzakavanzika nzemuviri ndizvo zvinoreva bonde.
Bonde rakaipa kunze kwewanano uye rakanaka kana vanhu vawanana. Hakuna chimwe chinhu chakaita seichi. Nekuti tese takaberekwa zvichibva pabonde, tese tiri vatadzi tinotoda kudzikinurwa.
Mwari anotendera bonde kana vanhu varoorana asi handihwo hurongwa hwake chaihwo asi akazvitendera. Muviri uno watakaberekwa nawo wakatadziswa. Chiratidzo chechikara chiri patiri ivanga reguvhu redu. Adamu naEva vaive vasina basa neguvhu kana rukuvhute nekuti vakaberekwa zvisina kutadza mukati, saka vaisada rukuvhute. Rukuvhute rwako runokubatanidza naamai vako. Saka aive akabatanidzwa naamai vake kudzokera kusvika kunaEva aive amai vevanhu vose vanorarama. Mutsetse murefu uyu werukuvhute unomiririra gwara rehurongwa hwaMwari hwakatendera nzira yatakaberekwa nayo.
Jesu akaberekwa pasina bonde.
Rimwe zuva mumazuva achauya, paKuuya kwake Kwechipiri, achadaidza vatsvene vake kubva kuguruva parumuko. Vatsvene vapenyu miviri yavo ichashandurwa. Tese tichavapo tiri mumiviri mitsva isingauye nebonde.
Saka, pakupedzisira, bonde richabviswa zvachose.
KUROORANA. NEKURAMBANA. _ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO 65-0221M
238 Zvino tarirai mutsvagiridzo yekupedzisira, tarirai, kuna Jesu Kristu mumwechete, (ndizvozvo here?) Munhu mumwe, Mwari, Emanuwere. Munotenda mazviri here? [ungano inoti “Amen”Ed.] Asi vanobata pakuva mudzimai wake Vakawandisa, tarirai, zviuru nezviuru zvakapetwa (ndizvo here?) mudzimai wake, Mwenga, Kereke. Manzwisisa here manje? [“Amen”]
239 Ndicho chikonzero nei akati kuna Adamu, bonde risati raitwa kana kuziviswa kumunhu, “berekanai muwande muzadze nyika,” asi aive achiri mumavambo, aive achiri zvose murume nemudzimai maari. Ipapo, zvinoreva kuti Mwenga anofanira kuuya achibva muShoko, nekuwanda kunoitiswa nemweya, kuwanda, tarirai, muzadze nyika.
Hurongwa hwaMwari hwekutanga hwaisanganisira kuwanda kupfurikidza mweya, kwete kuwanda kwepanyama kunouya kupfurikidza bonde. Eva aizobereka Kristu ari mhandara. Aizokura odaidza vatsvene vake vese kubva muguruva renyika.
GENESISI 1:27 Mwari akasika munhu nemufananidzo waMwari; akavasika murume nomukadzi.
Mwari ndiMweya, saka mufananidzo waMwari unofanira kuita mweya.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya; vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweyaa nezvokwadi.
Kusika zvinoreva kuti kuita chinhu kubva pasina. Mwari akasika mweya waAdamu nemwenga wake kubva pasina muChaputa 1 yaGenesisi. Vaive vakabatana semweya mumwechete. Mweya wechirume une hunhu hwechidzimai mauri.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomukadzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi munhu, musi wavakasikwa.
Akavaudza, vari mweya mumwechete, kuti vaberekane vawande. Uku kwaive kuwanda kwemweya.
GENESISI 1:28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi; muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
Muti wemuchero une muchero une mhodzi yawo mukati mayo.
GENESISI 1:11 Mwari akati: Nyika ngaimerese uswa nemiriwo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika zvikaita saizvozvo.
Muti wemuchero ndiwo amai. Chibereko chedumbu ndiye mwana.
RUKA 1:42 Akadana nezwi guru, akati: wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa.
Uyu ndiErizabetha aitaura naMaria.
Mbeu ndiro Shoko raMwari.
LUKA 8:11 Zvino mufananidzo ndiwo; Mbeu iShoko raMwari.
Saka Eva (muti wemuchero) aifanira kuunza mwana (chibereko) aive neShoko (Mbeu) mukati meMwana (muchero). Izvi zvinoitika chete kana Mwana ari Jesu, Mwari panyama.
JOHANE 1:14 Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu, (tikavona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwechete wababa,) azere nenyasha nezvokwadi.
Izvi hazvigoneki kuti zviitwe nemunhu. Bonde haringaunzi Mwana ane hupenyu husingaperi neShoko rakazara raMwari mumwana iyeye.
Chavaifanira kuti vaite kwaive kumirira kuti mwari aite kuti Eva abereke ari mhandara. Kwaive kusina muti wakaipa kuna Genesisi Chitsauko 1. zvose zvaive zvakanaka apo Adamu nemukadzi wake vaive vachiri mweya. Mwari akati miti yese yemichero yaive yakanaka muChitsauko 1. paive pasina muti waifanira kunyenyeredzwa.
GENESISI 1:12 Nyika ikameresa uswa, nemiriwo inobereka mbeu dzina marudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, ina marudzi ayo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
Kuna Genesisi Chitsauko 2, Mwari akaita kubva kuguruva muviri wemurume kuitira mweya wemunhu Adamu. Uku kwaive kusiri kusika kubva pasina.
GENESISI 2:7 Jehova Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya wehupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.
Mweya wemunhu waive nehunhu hwechikadzi mauri, zvaive zvisina kunaka kana kuti mweya wemunhu uiswe mumuviri wenyama wakadaro.
Saka muviri wenyama ndiwo wakazivisa miganhu pamweya wemunhu kuna Genesisi 2.
Nekuti Adamu aive ave mumuviri wenyama Mwari vaifanira kumuyambira pamusoro pengozi huru.
GENESISI 2:16 JEHOVA Mwari akayambira munhu achiti, ungadya hako miti yose yemumunda;
17 Asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwazvo.
Muti unomiririra mweya.
JEREMIA 17:8 Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura,
Jesu ndiye Muti weHupenyu nekuti iye oga ndiye anopa Hupenyu husingaperi. Satani ndiye muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
Mwari vakabva vaisa hunhu hwechidzimai mumuviri wakasiyana vakamudaidza kuti mukadzi.
Nzira imwe yavaifanira kuwanda pamweya yaive yekumirira kuti Mweya mutsvene ushanyire Eva kuti abereke Mwana Jesu ari mhandara. Aizokura. Kungadai kusina zvivi zvekufira. Aizodaidza vatsvene vake kubva kuguruva renyika sezvaachaita paKuuya Kwake Kwechipiri.
Nguva yese iyi kwaive nemurume nemukadzi wake umwechete. Hurongwa hwaMwari hwepakutanga.
KUROORANA NEKURAMBANA._ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
240 Muchiitiko chebonde, tarirai, zvikoro zvakasanganisa zvinhu zviviri izvi. Saka haukwanisi kuzviita, munotofanira kuzvidzosera kuChokwadi chacho, “kumavambo.”
241 Mazvinzwisisa here? Paive naDavidi mumwechete pachigaro chehushe chimwechete, mambo mumwe (akadiwa nemoyo waMwari) nevakadzi mazana mashanu. Jesu agere pachigaro chake chehushe, Hareruya, muMereniyamu, neMudzimai; sezvazvaive pakutanga, akasikwa kubva panyika, neruoko rwaMwari weMasimba ose, paRumuko, nemiviri mizhinji. Muripowo.
242 Madzimai, anoshingirira kuti avepo, huyai muna Kristu, munobva mabuda mumatambudziko ari munyika. Asi kana mukaramba muringori nhengo dzekereke muchiedza kurarama zvakanaka zvinoremekedzeka, pachenyu, hamufi makazvikwanisa. Chero munhu rume haangazvikwanise achirarama asiri muna Kristu. Pauro akaenderera mberi achiti, “Asi vari muna Kristu, hamuna murume kana mukadzi.” vose vamwechete.
Panyama tiri varume nevakadzi nekuda kwekuwanda kwedu kunouya panyama. Izvi zvinotiita kuti tifanane nemhuka dziri kungozviwandira. Nzira imwechete yekunzvenga rufu , unova mubairo wekupedzisira webonde, kuwanda kupfurikidza mweya uko kunoitika kana munhu achinge azvarwa patsva paMweya waMwari. Mwari oisa Mweya wake maari, mukati memoyo wemunhu uye munhu iyeye, murume kana mukadzi, anenge ave chikamu cheMwenga waMwari.
Barika raitenderwa muTestamente Yekare. Barika raitenderwa neMurairo. Saka kana munhu achitenda kubarika anofanirawo kuteerera murairo wekudzingiswa, murairo weSabata reMugovera, kugezwa kwemaoko netsoka, kuuraya Gwayana rePasiovha nezvimwewo zvakadaro. Asi kunyange munhu akaita zvese izvi, nezvimwe zvese zvinodiwa neMurairo, Murairo haupe Muponesi. Saka kana wakararama pasi peMurairo unofanira kubata mabasa akanakisa nekugonera Murairo kuti upinde denga. Kana ukapotsa, unofanira kuuraya mhuka yechipiriso kutemberi iri kuJerusarema. Ropa remhuka iroro rinoripira zvivi zvako asi haribvisi shungu dzekutadza mauri. Saka Murairo haufi wakabvisa shungu dzekuita chivi. Pasi peTestamente Itsva tine Ropa remuMuponesi kuti risuke zvivi zvedu. Mweya Mutsvene, Hupenyu huri muRopa rake, zvese zvinouya mumoyo yedu kuti zvibvise shungu dzekuita zvivi.
Hakusisina temberi yemaJuda yakaparadzwa muna 70 AD. Saka hakusisina kuripira zvivi neropa remhuka. Saka Murairo hauchakwanisi kuregerera zvivi sezvo iri sungano yakazadziswa ikabviswa paCalvari. Barika raitenderwa chete neMurairo, sungano yekare. Saka barika rakabviswa zvakare. Kana uchida barika reMurairo, unofanirawo kurarama usina zvivi nekuti Murairo haupi Muponesi. Sungano itsva, yakaitwa paCalvari, ndeyekutidzosera pamavambo. Murume mumwechete nemukadzi wake mumwechete.
Jesu akagonera murairo saka aive asina zvivi. Saka barika rinotenderwa paari Iye OGA. Anokwanisa kuva nenhengo dzakawandisa dzeMwenga wake (Kereke yechokwadi) sekuda kwake sezvo akachengetedza Murairo akararama asina chivi saka anokwanisa kuroora nhengo dzeMwenga Wake.
Hakuna mumwe munhu akararama asina zvivi. Saka hakuna umwe anokwanisa kutora madzimai anodarika umwechete, kunze kwekunge wekutanga afa.
KUROORANA. NEKURAMBANA- JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
275 Asi, tarira iwe, mukadzi, uri uri dombo rinokosha kana uchida hako, asi shungu dzinofanirwa kubva kwauri. Uye munoona kuti Wanano neKurambana zvaive zvakaita sei, Jesu akanongedzera kumashure, chikonzero chaive rudzi rwenyu ndirwo rwaikonzeresa chivi. Ndicho chikonzero chekuwanana nekurambana, uye zvinhu zvakabva zvaziviswa. Pakutanga zvaive zvisina kudaro, uye hazvichazova zvakadaro munyika kumashure kwenguva.
Barika rakaveko nekuti Eva akazivisa chivi kupfurikidza kuita kwezvepabonde. Adamu aifanira kuva akataka mutadzi Eva omirira kuti Mwari amuitire mumwe mukadzi. Asi Adamu, saJesu, akada mukadzi wake zvekuti haaikwanisa kumuuraya. Saka Adamu akabatana naye mukuita chivi ichi kuti arambe achigara naEva saka akavimba kuti Mwari vaizowana imwe nzira yekugadzirisa kuita kwekutadza uku. Mwari akafukidza kutadza kwavo neropa regwayama raive risina chivi. Saka mhuka, yakazoshandurwa kuitwa nyoka yakangwara, yakazivisa chivi. Mwari achibva ashandisa mhuka isina chivi, gwayana, kuripira chivi. Jesu akada Mwenga wake aive azere zvivi (vatendi vechokwadi mukati memakore 2 000 enguva dzemakereke) kwazvo zvekuti akasarudza kuva chivi akatifira akaenda kugehena pachinzvimbo chedu kuti akunde Satani. Saka Ropa reGwaiana risina zvivi rakaparadza zvivi zvedu uye hupenyu hwaive muRopa rake, Mweya Mutsvene, hwakauya mukati memoyo yedu kuzobvisa shungu dzese dzekutadza. Iri raive zano repamusorosoro kwazvo.
Mwari akashandisa nzira yakakanganiswa iyi yekuunza hupenyu panyika nebonde nekuti aishanda naAdamu aive ane zvivi vose naEva vaive vatadza. Saka inzira inowanza hupenyu huzere nezvivi. Ndicho chikonzero nei kutadza kuzhinji kunosanganisa bonde.
Kana murume akaroorana nemukadzi mumwechete Mwari anoona rukukwe rwake serwakachena. Asi denga rinotituka kana tikadarikira miganhu iyi. Zvino kuita kwese kunova kwakaipa. Bonde rinongounza hupenyu hwekanguvana. Hakuna munhu akaberekwa nebonde akararama kwemakore 1 000.
GENESIS 2:17 Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usadya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwazvo.
Zuva raMwari makore 1 000. hakuna munhu akamborarama kwemakore 1 000. Metusera akararama makore 969.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita semakore anechuru, namakore anechuru, sezuva rimwe.
MuMereniyamu Mukadzi waKristu achararama kwemakore 1 000 sechapupu chekuti miviri yavo mitsva isingauye nebonde haifi inorarama nekusingaperi, kwete hupenyu hwekanguvana. Muviri mutsva uyu uchave chapupu chekupedzisira chedzikinuro yedu kubva kuzvivi.
KUSARUDZA. MUKADZI. LA.CA V-2 N-28 CHINA_ 65-0429E
135 “Mukadzi akagadzirirwa murume wake, kwete murume kumukadzi.” ndicho chikonzero nei, pasi peMurairo wekare, barika raitenderwa. Tarirai Davidi agere apo nevakadzi mazana mashanu, Bhaibheri rinoti, “ Aive munhu aive pamoyo waMwari.” nevakadzi mazana mashanu, Soromoni aive nechiuru chemadzimai, asi hapana umwechete wemadzimai aya aifanira kuita mumwe murume.
136 Mune kaseti randataura pamusoro peWanano neKurambana. Iroro, pamusoro pegomo paTucson, kwete kare kare, ndaive pamusoro ipapo ndichinamata nezvazvo. Vakapedza chikoro, kuti vaone shongwe iyoyo yemoto ichipoteredza gomo ichienda iri mudenderedzwa duku, ichienda ichidzoka, ichikwidza ichidzika. Vanhu vanogara nzvimbo dzakapoteredza pano vanozviziva, vakaiona; paakandiudza chokwadi pamusoro pewanano nekurambana, kwaibvunzwa. Kana paine divi rimwe riri kuenda nenzira iyi, nerimwe riri kuenda nenzira iyo, panofanira kuva neyechokwadi pakati padzo. Kumashure kwezviSimbiso Zvinomwe, akataridza kuti chaive chokwadi pazviri ndechipi.
137 Tarirai, zvino, aisakwanisa kuva neumwe asi murume mumwechete, nekuti, “Mukadzi akagadzirirwa murume , kwete kuti murume akagadzirirwa mukadzi.” Vakadzi ivavo mazana mashanu vose vaive mudzimai waDavidi, uye rwaive rudzi. Kristu paachaita chigaro cheushe muMereniyamu, Mwenga wake achange asiri munhu mumwechete, asi achave makumi ezvuru, Mwenga, vose mumumwechete. NaDavidi aive nevakadzi vakawanda, pamumwe nemumwe wavo, asi vose pamwechete vaive mukadzi wake. Semuviri wese wevatendi unova mwenga waKristu,' ndiwo mukadzi, mudzimai. Iye ndiye murume. Zvino takagadzirirwa Kristu. Kristu haana kugadzirirwa isu.
139 Kana murume akasarudza musikana mumhuri, haafaniri kuwira parunako, nekuti runako runonyengedza. Uye runako, runako rwemazuva ano nderwaSatani.
“Oh,” ndakanzwa munhu achidaro kunze uko, “Ngwarira pano muparidzi!” “Oh,”
… Pakutanga, takaona kuti Satani aive akanakisa kusvikira paakanyengedza ngirozi . Uye aive ari ndiye ngirozi yakanakisa kukunda dzimwe dzese. Zvataridzwa, zvigere munaSatani. Zvirevo zvinoti, Soromoni akati, “runako haruna maturo.” ndizvozvo chaizvo. Chivi chakanakisa. Chokwadi, chakanaka. Chinoyevedza.
KUROORANA NEKURAMBANA_ JEFF. V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
204 Davidi mambo vaimiririra Kristu! Chengetai izvozvo mupfungwa dzeyu. Davidi aimiririra Kristu. Munobvumirana nazvo here izvozvo? [Ungano inoti “Amen.”-Ed.] Kristu ari kugadzirira, kuenda kunogara pachigaro chake chehushe. Davidi uyu, murume akadiwa naMwari, ane vakadzi mazana mashanu. Muri kuona zvandinoreva here? Davidi nevakadzi vake mazana mashanu, Soromoni nevake chiuru. Soromoni mwanakomana waDavidi, pakuberekwa; zvinomiririra Jesu Kristu, Mwanakomana waDavidi, pamweya. Asi izvi zvakaberekwa zvakakadaro. Hupenyu hwepabonde. Zvichazova zvakasikwa pamweya. Nei? Kusikwa. Tarirai, ndiyo nzira yazvaive pakutanga, asi kwete muhupenyu huno hwatiri kurarama nhasi.
205 Tarirai, musakundikane pane izvi, zviisei pasi pemoyo yenyu. Hapana mumwechete pavakadzi ivavo aikwanisa kuita umwe murume. Ndiye chisikwa chekutanga, kwete mukadzi. Hapana mumwechete wevakadzi ava aikwanisa kuita umwe murume, asi murume mumwechete iyeye aikwanisa kuita chiuru chevakadzi. Ndiyo ZVANZI NAJEHOVA. Ndiro Bhaibheri.
Pasi pebarika paive pasina chikonzero chekuramba mukadzi usati waroora umwe mukadzi.
Murume aingotora vakadzi vakawanda sekuda kwake. Izvi zvinomiririra kukwanisa kunoita Jesu kutora nhengo dzeMukadzi wake dzakawanda sekuda kwake.
KUROORANA. NEKURAMBANA._ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO- 65-0221M
213 Tinoona kuti, rufu rwaive rwakatukwa. Rufu kutukwa kwechivi chemukadzi, ukauya nekumukadzi kwete nekumurume. Nenzira yake yekurarama hupenyu hwake, naye, rufu rwese runouya. Nzira yake yekupa hupenyu rufu. Vangani vanoziva izvi? Jobo 14, kana uchida kutarisa pamaGwaro.
214 Kana uri nemubvunzo pane izvi, ndine maGwaro akanyorwa pasi pamusoro pezvese izvi.
215 Kana uchida kuverenga Jobo 14 inoti, “Munhu akazvarwa nemukadzi ana mazuva mashoma, azere nekutambudzika.” Ndizvo here? “Anobuda seruva, ndokusvava, anotiza semumvuri, haagare.” Nezvimwe zvakadaro. Mazviona? Munhu wese akazvarwa nemukadzi, akazvarirwa rufu kubvira achisvika panyika.
216 Asi kana akazvarwa mukusika kwaMwari, haangazofi; akabva pane umwe muti uya waive mubindu reEdeni, Kristu. Hupenyu husingaperi hunobva paMuti iwoyu.
217 “Oh,” munoti, “Mukadzi aive muti?” Chokwadi. “Hongu vaiti, 'Musadya zvemuti uyu.' Mwari vakadaro, kuna Genesisi, 'Muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadya.”
218 Nei mukadzi ari muti. Ndiye muti wemuchero. Imi muri michero yanaamai venyu. Mbeu yechibereko ndimi. Ndizvo chaizvo. Muchero weMuti wehupenyu, waive mubindu reEdeni, ndiye Kristu. Kupfurikidza mukadzi kwakauya rufu; kupfurikidza murume, chisikwa chekutanga, kunouya hupenyu. Kuzvarwa nemukadzi zvinoreva rufu; kuzvarwa munaKristu zvinoreva hupenyu. Manzwisisa here? Ndiko. Munoona kuti vamwari ava vanoenda kupi, hamuvaone here?
219 Pakutanga Adamu naEva vakaita rudzi rwaAdamu naEva rwechipiri, tarirai, vakawedzera. Kuwedzera kwaAdamu naEva kwaive kwekupfurikidza bonde, kuzadza nyika, asi zvaive zvisina kudaro pakutanga. Mwari akangoita murume nemukadzi, sezvaakaita zvimwe zvisikwa zvake, tarirai, pamutemo, sekereke.
221 Hakuna mushumiri anokwanisa kuroora chirikadzi. Munozviziva here? Munoda kuzviverenga here? Zvakanaka, endai kuna Revitiko 21:7 naMuporofita Ezekieri 44:22, pachakuratidzai kuti mupurisita aisatenderwa kuroora mukadzi akambobatwa neumwe murume. Uru rudzi rwemhandara Mwenga waKristu, nekuti vanobata moto waMwari, zvakaitwa nevapurisita, vanakomana vaAaroni. Hatina nguva yekuti tizviverenge zvese, kuti tibude pano masikati, tine maminetsi 20. vanakomana vaAaroni ndivo vaibata moto waMwari, saka vaisafanira kuwana mudzimai akambobatwa neumwe murume. Mwari vasingashanduke ndivo vakataura kudaro. Havangawani umwe mudzimai, mukadzi akambobatwa neumwe murume kuratidza rumwe rudzi apa, kana muchida kuzviona, kuti kereke yaMwari yakachena, haina kuitirwa vupombwe, Shoko raMwari, kwete masangano akabatwa basa nevanhu venyama.
Mukadzi anofanira kuva mhandara kana achida kuti chitsidzo chewanano yake chisungwe.
Chipo chake chehumhandara. Husiku hwekutanga murume achirara nemudzimai wake, nyama yake yehumhandara inodambuka obuda ropa. Ropa rakaenda pamachira ndicho chipo chake chehumhandara.
Nyoka yakaita bonde naEva. Saka nyoka ndiyo yakamubvisa humhandara, ikamubudisa ropa. Chivi chekutanga chaive bonde. Nyoka, mhuka, yaive nemhosa yekudeura ropa raEva. Bonde raizounza hupenyu hwaizofa. Saka Mwari akatambira kuuraya kana kudeura ropa remhuka sekuripira zvivi.
Mutadzi Eva aive asisiri mhandara paakazodzokera kumurume wake.
Saka Mwari vanoda kuti mukadzi ange ari mhandara paanowanikwa. Kana asisiri, anofanira kutanga areurura chivi ichi kumurume achamuwana pekutanga. Kana akasareurura, ane mhosva yekuita chitsidzo chemuchato chenhema nekuti akaita bonde asati aroorwa, zvinodaidzwa kuti hupombwe.
Kana murume wake akazoziva kuti haasi mhandara anenge asina kuroorana naye nekuti anenge aita chitsiidzo chekunyepa (kunova kusiri kusunga) ndicho chega chikonzero chinoita kuti agone kumuramba ozowana mhandara.
Kana, kumashure kwekuroorwa, akaita upombwe neumwe murume, murume wake anokwanisa kumuramba asi haazoroorwazve sezvo anenge aputsa chirangano chake asi yaive sungano yakakwana yekuti vaizoparadzana nerufu.
DEUTERONOMIO 22:13 Kana munhu akawana mukadzi, akapinda kwaari akazomuvenga,
14 Akamupomera zvinonyadza, nokutaura zvakaipa pamusoro pake, achiti, Ndakawana mukadzi uyu, asi ndakati ndichiswedera kwaari, handina kuwana zviratidzo zvehumhandara hwake kwaari';
15 Zvino baba vemusikana naamai vake vanofanira kuenda nezviratidzo zvehumhandara hwake kuvakuru veguta pasuwo.
16 Zvino baba vomusikana vanofanira kuti kuvakuru, 'Ndakapa murume uyu mwanasikana wangu, kuti ave mukadzi wake, asi zvino omuvenga;
17 Tariri womupomera zvinhu zvinonyadza, achiti, 'Handina kuwana zviratidzo zvehumhandara kumwanasikana wako; asi hezvi zviratidzo zvovumhandara hwomwanasikana wangu, zvino vanofanira kuwarira nguvo pamberi pevakuru veguta.
18 Ipapo vakuru veguta iri vanofanira kubata murume uyu, vamurove.
19 Nokumuripisa mashekeri esirivheri ane zana, vagoapa baba vomusikana, nokuti wakataura zvakaipa pamusoro pomusikana weIsiraeri; zvino iye anofanira kuva mukadzi wake, haangamurashe mazuva ake ose.
21 Vanofanira kubuditsa musikana kumukova yemba yababa vake, varume veguta rake vagomutaka nemabwe, afe; nekuti wakaita sebenzi pakati paIsiraeri. Pakupata kwake paimba yababa vake; saizvozvo anofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.
22 Kana murume akawanikwa achivata nemukadzi akawanikwa nemurume wake, Ivavo vose vanofanira kuurawa, murume wakavata nomukadzi naiye mukadzivo. Saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pakati paIsiraeri.
Zvinobva zvaremera murume wake kuti amutarisire kunyanya kana akakwanisa kuziva zvakaitika muhupenyu hwake kare, anokwanisa kumuramba oroora mhandara ane mukana mukuru wekuzvideredza kwaari sezvo pasina umwe murume akapinda pakati pake nemurume wake. Zvisinei kana mukadzi ane mhosva achinzwisisa achitarisira kumurume wake semusoro wake uye achizvipira kuzvininipisa kwaari, anokwanisa kumuregerera ogara naye.
225 Mateo 5:32 ndinoda kuti muone pano, mutsigire pfungwa yekuti “mumwechete” “nevakawanda. Mateo 30-... ndofunga tingatangire kuna Mateo 5:32.
Zvakataurwa kuti, Ani nani ucharasha mukadzi wake, ngaamupe rugwaro rwokuramba.
226 NdiJesu aitaura, Mumwechete akadaro, “kubva pamavambo.” zvino tarirai.
Asi ndinoti kwamuri, Aninani acharasha mukadzi wake, nekuda kwemhosva yevupombwe, unomuitisa vupombwe; tarirai, aninani acharasha mukadzi wake, nemhosva … yevupombwe, anomuitisa vupombwe: (nei? Achawanikwa zvakare) aninani unowana akarambwa unoita vupombwe.
Vupombwe (hwataurwa pekutanga, fornication) ndiko kuita zvebonde musati mawanikwa zvinoita kuti sungano yewanano isaverengwe, zvichisiya murume achikwanisa kuroorazve mhandara. Sunano yenhena iyoyo ndiyo yega inokonzera kuti kuve nekurambana nekuroora kana kurooorwazve.
Izvi hazvibati kuhupombwe kunova kuita zvepabonde kunze kwewanano uchisiya mukadzi kana murume mumba. Kana vanhu vakawanana zviri pamutemo, hakuna chivi chinokwanisa kuputsa sungano iri pamutemo iyoyo.
227 Tarirai, ane murume achiri kurarama, hakuna mumwe murume anokwanisa kumuroora. Zvisinei nekuti anoitei zvakare ndiyani, murume wake achiri mupenyu, hakuna chinomugonesa kuwanikwazve zvachose. Asi, hazvibati kumurume. “Zvinoitisa mukadzi,” kwete murume. Mazvinzwa here? Munofanira kuita kuti Shoko risvike kumana evanhu. Tarirai, hakuna chiri kuti murume haagoni, asi mukadzi haatotenderwe. “mukadzi ndiye anoitiswa,” kwete murume. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri, “kuitisa mukadzi.” hazvina kutaurwa pamurume kuti asaroore zvakare, asi “mukadzi.” Nei? Zviri murudzi rwaKristu.
228 Tarirai, zvakataurwa kuti haakwanisi kuroorwazve, mhandara chete. Murume anokwanisa kuroorazve. Anokwanisa, anokwanisa kuroorazve kana achiroora mhandara, asi haagoni kuroora mukadzi weumwe munhu. Kwete. Kana akaroora mukadzi akarashwa, ari kurarama muhupombwe, zvisinei nekuti ndiyani. Bhaibheri rinoti “ Aninani anowana mukadzi akarashwa unoita vupombwe.” Zvinzwisisei, hakuna chinonzi kurambana.
229 Tarira zvazvakasikwa zviri kumashure uko, “kubva pamavambo,” Zvino? Kuroora kana kuroorwazve, zvino tarirai, murume anokwanisa, asi mukadzi haakwanisi. SaDavidi, saSoromoni, sekuenda mberi kweBhaibheri, zvino, zvimwechete naDavidi nevamwe vese.
230 Munoona kuna VaKorinte vekutanga 7:10, tarirai, Pauro anoraira mukadzi, ari kuramba murume wake, kuti ngaagare asingawanikwi kana kuti adzokerane nemurume wake, kwete kuroorwazve. Anofanira kugara asingawanikwe, kana kuti adzokerane nemurume wake. Haakwanisi kuroorwazve. Anofanira kugara asingawanikwe, asi, tarirai, haana kubvira ataura pamusoro pemurume. Hamungaite kuti Shoko rinyebe. “Kubva pakutanga,” bonde rakaunza barika. Zvino, Shoko raMwari rinofamba pachokwadi richitaura kusika kwaMwari, kufamba richienda mberi.
231 Tarirai kuti chikoro chimwe chakaenda sei kumabazuva, chimwe chikaenda kumadokero, pazviri? Munofanira kudzoka kuchokwadi, kuti muone kuti chimbori chii.
232 Zvakagara zvakadaro, ndiyo sungano yaMwari kubva pakutanga. Chekutanga, mavambo asati avapo, kubva pakutanga kwaingove neumwechete neumwechete. Mumashure mekuuya kwechivi, kwakaita murume mumwechete nevakadzi vakawanda; zvikafamba zvakadaro, mhuka dzese, nevanhu nyama yatakaberekwa nayo iyi ndeyemhuka. Tiri mhuka, tinozviziva, tese, tarirai, uye kwese kusika kwaMwari kuri kupfuurira mberi.
243 Asi kuti titwasanudze nyaya yekuwanana nekurambana iyi, kuti muzive kuti chaive chakanaka kana chakaipa chii, anoratidza pachena mumarudzi. Kuna Kristu mumwechete; nenhengo zhinji dzeMukadzi wake. Tarirai, anokwanisa kutibvisa pahupombwe hwemweya nedzidziso dzenhema, chero nguva yaasarudza; asi iwe ungaedze sei kumurasha, wobudirira? Murume anokwanisa kuramba mukadzi wake owana mumwe; asi kwete mukadzi haangarashe murume wake owanikwa neumwe. Onai kuti mimvuri yese nendudzi dzese dzakaenzaniswa sei? Tarirai kusika kwekutanga; kwete zvakazobuda pakuri kumwe kwese. Kwete kereke; mwenga kupfurikidza Shoko. Kwete mukadzi; murume nguva imwe neimwe. Ndicho chikonzero nei risina kubvira rataura nezvemurume kuti asaite izvi; mukadzi ndiye anogarotaurwa nezvake. Ndizvo chaizvo.
244 Asi anokwanisa kuva Mwenga waKristu, nekuva... Rangarirai mukadzi sembabvu yemurume, Bhaibheri rinoti anogona pa-… “Asi handitendere mukadzi kuti adzidzise, kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume, asi ngaanyarare. Nekuti Adamu akatanga kuvapo, tevere Eva, Adamu haana kunyengerwa, asi mukadzi akanyengerwa akapinda pakudarika. Asi uchaponeswa nokubereka vana, kana vachirambira mukutenda norudo, novutsvene pamwechete nokuzvidzora,” Nekuti ipapo anobva ava rumbabvu rwemurume wake.
KUROORANA. NEKURAMBANA_ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
258 Zvakadaro nekereke inoramba kubata mimba panguva ino yatiri kurarama, kuunza vana venguva ino. Hatisi vekwa Luther, hatisi vekwaWesleys, uye hatisi vePentecosti! Tinofanira kuti tive vana venguva ino, kupfurikidza mimba yeShoko raMwari, kuti tiunze mwana wenguva ino, Mwana weMbeu. Amen. Ndovimba muri kunzwisisa. Hamuna kuita mimba, kwete, saka Akaitei? Murashe, negwaro rekurambana. Ndizvozvo chaizvo. Asi mukadzi haana kumurasha. Murume ndiye akamuramba.
259 Akaenderera mberi kunoratidza Shoko rake kuMuviri, vakabvisa chipomero paari, zvimwechete, pachake. Vana vake vakatanga kutaridzika kufanana naye zvakanyanya, nekuti riri kukura, kana kuti, vakava vana veShoko, kwete vana vemukereke. Vana veShoko! Uye Mwenga achave mukadzi muduku anodadisa weShoko, asina kupomba, asina kubatwa nemapato eumwe murume, kana kuti nzira dzakaitwa nemunhu. Achave ari mutsvene asina kubvira apomba, Mwenga weShoko! Amen, Amen. Ndofunga mabatisisa ipapo, zviri pachena. Achave mwanasikana waMwari ane mimba.
274 Tarirai, zvino, mukadzi ane nzvimbo yake, uye ibwe rinokosha. Soromoni, murume uyu aive nezviuru zvevakadzi ... kana kuti aive nevakadzi chiuru, toti, akati, “Munhu awana mukadzi, awana chinhu chakanaka.” Akati “mukadzi akanaka akafanana nebwe rinokosha mukorona yake,” kukudzwa ikoko. “Asi usakarurama akafanana nemvura muropa rake,” ndihwo hupenyu hwake. Akati “kunokwanisa kuwanikwa munhu mumwechete akarurama pakati pechiuru chevanhu,” Soromoni akataura izvi, “Asi” akati “Haungawane mukadzi mumwechete akarurama pakati pechiuru chevakadzi.” Soromoni akataura kudaro, mazviona. Zvino tarirai, ndizvo zvazviri.
284 Ichi chinhu chakaoma chakaipisisa, ndanga ndisingazivi kuti ndozvitaura sei. Ndichadii, kana ndiri nevarume nevakadzi vagere paungano yangu, vamwe vavo vaive muwanano kaviri kana katatu? Varume nevakadzi vakanaka, vose vakasangana! Chii chakazviita? Dzidziso yenhema, chokwadi, vasingakwanisi kumirira kuna Mwari.
285 “Chabatanidzwa naMwari, munhu ngaarege kuparadza.” Kwete chabatanidzwa nemunhu; Chabatanidzwa “naMwari”! Kana ukaita zaruriro iri kubva kuna Mwari ichiuya kwauri, ndiye mukadzi wako, chinhu chimwechete ichocho, ndicho chako, hupenyu hwako hwese, mazviona? Asi chabatanidzwa nemunhu chero munhu anokwanisa kuparadza. Asi “Chese chabatanidzwa naMwari,” Akati “Ngakurege kuva nemunhu anoparadza.” kwete zvakaitwa neumwe akamwa zvake hwahwa kana mejasitiriti kumatare edzimhosva, kana umwe muparidzi ari kutodzokera shure zvake ane chitsama chezvitendero mukabhuku, zvinovarega vachiita chero chinhu munyika, asi Shoko raMwari riripo pakadaro apo, mazviona? Ndiri kutaura nezvechakabatanidzwa naMwari.
Kana vanhu vakaroorwa zviri pamurairo sungano yavo inenge yakasungwa kusvikira vaparadzaniswa nerufu. Havakwanisi kurambana vachizopinda muwanano zvakare. Kana munhu akatadza zvakaipisisa pakadaro vanogona kuparadzana asi vachiramba vari murume nemukadzi mumaziso aMwari.
307 Hama, ndichivhara, munokwanisa kuenda neizvi. Ndipo pazvakabuditswa pachena kwandiri, zvandichakutaurirai parizvino, saka musapesane nazvo.
308 Zvino ndiri kutaura nevateveri vedu chete, vari kunditevera neShoko iri chete, kwete kunze. Ndibatirei kutaura uku pamberi paMwari. Kuboka rino chete!
309 Tiri kuwanikwa tiri munyakanyaka iyi nekuda kwetsanangudzo dzakaturikirwa zvisiri izvo. Ndizvo here? Ndicho chikonzero nei imi vakadzi makawanikwa kechipiri, nemi varume, nekuda kwepfungwa dzakaturikirwa zvisiriizvo. Ndinoda kukuratidzai chimwe chinhu chaAkandiudza.
310 Kana Mwari, Musiki wedu, akabunzwa mubvunzo wekuti akanga ari pasi pano rinhu, Jesu Kristu; uye kuti muporofita wake wedzikunuro akaburukira kuIjipita, Mosesi, kuti aburitse vana vaIsiraeri kuIjipita, kuti avaise kunyika yechipikirwa; Jesu akati Mosesi paakaona vana vari mukuita uku akavapa rugwaro rwekurambana, nekuti zvinhu zvaive zviri zvazvaive. Mosesi akaona kuti, sezvazvanzi “wakatendera ...” Mwari vakatendera Mosesi, muporofita akazviisa kuvanhu, kuti vavatendere kunyora rugwaro rwekurambana kwavari.
KUROORANA. NEKURAMBANA. JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
311 Kuna VaKorinte vekutanga Chaputa 7 vhesi rechi12 nerechi 15, muTestamente Itsva, muporofita,Pauro, akasangana nechinhu chimwechete mukereke, akataura izvi, “Ini, haazi Ishe.” ndizvo chaizvo? Nekuda kwekurambana.
312 “Zvaive zvisina kudaro kubva pakutanga.” asi Mosesi akatenderwa, Mwari vakaona zvakarurama. Pauro aivewo nemvumo, paakaona kereke iri panyaya yakadaro.
313 Munotenda izvi kuva chokwadi, mozvitenda kuti zviri kubva kuna Mwari! Nekujekeswa kweGore rake neShoko rake rakandisvitsa pano, Mwari ari pamusoro pemakomo haanganditendere kuita zvimwechete here, kukutenderai kuenderera mberi sezvamuri, morega kuzviita zvakare! Endai nemadzimai enyu mugare nerugare, nekuti nguva yapera. Kuuya kwaIshe kwaswedera. Hatisisina nguva yekupatsanura zinhu izvi. Musaedza kuzviita zvakare! Ndiri kutaura neboka rangu chete. Asi kana uri muwanano ... uye Mwari ndiye Chapupu chaizvozvo, pagomo, zvekuti ndinokwanisa kutaura izvi, zaruriro yemweya, nekuda kwekuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe, uye uyu mubvunzo uri mushoko raMwari. “Regai vapfuurire mberi sezvavari, vasazotadzazve!”
Kana tikasvika paChokwadi, Mwari anotitambira sezvatiri. Asi hatizofaniri kupinda zvakare muwanano pashure paizvozvo.
314 “Zvaive zvisina kudaro kubva pakutanga.” Ndizvo chaizvo, zvaive zvisina kudaro, uye zvichange zvisina kudaro kumagumo. Asi pasi pemararamiro anhasi, sevaranda vaMwari... handizvidaidzi kuti muporofita waMwari; asi ndinotenda kuti pamwe, kana ndisina kutumwa kune izvozvo, ndiri kugadzira nhandare kuitira paachauya. Saka pasi pemararamiro anhasi ndinokurairai kuti endai kudzimba dzenyu, nevakadzi venyu izvozvi. Kana muchifara navo, garai navo, kudzai vana venyu muhuvepo hwaMwari. Mwari vave netsitsi nemi kana mukazviita zvakare! Mudzidzise vana venyu kuti vasaite zvinhu zvakadaro zvachose, vakudzei muhuvepo hwaMwari. Nekuti mave zvamuri, handei zvino, nenguva yeusiku yapera yatiri kurarama tiri, “tishingirire chiratidzo chekudanwa kwepamusorosoro muna Kristu,” uko zvinhu zvese zvichagoneka.
Kana wakapinda mune imwe wanano kumashure nekuti waifunga kuti zvinotenderwa, Mwari vanokwanisa kukuregerera kana ukatendeuka muzvitadzo zvako. Asi kana ukapinda mune imwe wanano munguva ichauya kana kuudza umwe munhu kuti awane kana kuwanikwazve, uchange uri pakaoma. Mwari vanokanganwira zvakaitika usati waziva panyaya iyi yekuwana kana kuwanikwazve.
Kana vanhu vakarambana vakapinda mune imwe wanano vanoedza kugadzirisa kutadza kwavo kupfurikidza kukurudzira vamwe vanhu kuita izvozvo, kuita kunge zvinozoita zvakanaka kana zvikaitwa nevanhu vakawanda.
318 Saka zvakadaro nhasi, Ishe Mwari, pakupera kwenyika, sezvo tiri pano pasi penyasha dzaMwari, nekuziva kuti nguva iri kuuya tichazvidairira Pamberi pake. Kuti wakaita zvakadai, Ishe, ndine chokwadi, mumaziso evanhu, vachazvibata kunge zviri kubva kwaMuri. Kuwana chapupu nhasi, chevahu vakawanda vakaona chiratidzo ichocho mugomo, pakauya vatumwa vaMwari vari muchamupupuri, pachakauya muVatumwa vanomwe, pakuratidzwa kwezvakavanzika zvinomwe zvichitambanudzwa; mutumwa umwechete iyeye, nerutivi rumwechete, pagomo rimwechete, zuva rakaratidzwa izvi!
319 Mwari ndinonamata kuti vanhu vachaenda kudzimba vachitenda kuti Mwari vavapa nyasha idzi. Ndangozvitaura, Ishe, nekuda kwemvumo. Uye ndangotaura kupfurikidza kutendera kwenyu, Mwari. Murege vanhu venyu vatende kuti havazoiti chivi ichi zvakare! Uye ngavarege kuita chero chivi zvakare, asi kuti vakudei nemoyo yavo yese. Mwari isai mufaro mumhuri idzi, uye vakure vachikurisa vana vavo muhevepo hwenyu Mwari.
VAKORINTE BHUKU REGADZIRISO_ JEFF.IN SVONDO_ 57-0414
E-49 Pakutanga vaive munhu mumwechete. Mwari, paakaita munhu, akamuita vanhu vaviri mumumwechete, vose murume nemukadzi. Vakamupatsanura panyama vakamuisa pano pasi ari munhu wenyama, chikamu chaive mukadzi chikasara chiri mweya. Tarirai hama. Mwari aive akangwarira pazvinhu izvi. Oh, zvakaitika sei ...Usachirege chichikusiya. Mwari haana kubvira atora guruva akaita Eva. Angadai ari chisikwa chakasiyana; akabva pane chimwe chisikwa. Mwari akaenda pamoyo waAdam, akabvisa mbabvu iyi kubva pasi chaipo pemoyo wake. Vakatora mbabvu vakamuitira mukadzi; chikamu chemweya waAdamu waive mumukadzi. Vaviri vakava mumwe. Hupenyu, nyama nemweya chinhu chimwe. Chinhu chimwe chakanakisa, mukadzi chaiye nemurume chaiye, mudzimai chaiye. Chinhu chimwechete vari pamwechete. Rudzi rwupi urwu? RwaKristu. Kubva mukubwinya kwake chibereko, kwete kuti muCatholic, muMethodist, muBaptist kwete, kurai ... Kubva mumoyo waKristu akatora mudiwa wemoyo akanakisa anoteerera uye mutsvene nepaanogona napo. Akatendeka seruva reLily.
Tarira – tarira kumashure uko, Soromoni achitaura, “ Huya,mudiwa wangu, ngatifambe mumatamba. Ngatitore kuzara kwerudo rwedu.” Kana mutendi wechokwadi akavhura maoko ake nemoyo muchena akabatira pana Kristu, kukura kwerudo rwaKristu ikoko, anoenda mukubwinya kwake, semukadzi waKristu, sezvinongoita murume kumukadzi chaiye.
E-50 Tinofanira kuva vanhu vakadii? Tiri kuitira Kristu hupombwe here? Tiri kuvimba netumwe tunhu tuduku duku here tichimhanyidzana nenyika, nezvinhu zvenyika, uye tine kufunga kwenyika kwete rudo nekuzvipira kwatinofanira kuva nako?
Mungafunga here, mungafunga mukadzi wenyu, hama, achiuya achigara pamakumbo penyu, nekanguwo kake kakanakisisa, nekarokwe kake kemukati kane maresi nebvudzi rake rakagadzirwa nezvimwe zvakadaro, okumbundirai oti, “Oh Johane, ndinongokuda. Ndinokudisisa.” Unobva waziva kuti pane zvisina kumira zvakanaka.
KUSARUDZA MUKADZI_ LA.CA V-2 N-28 CHINA_ 65-0429E
170 Mumwe akapiwa mimba neShoko raMwari uye achaunza muviri, muviri wakapedziswa waJesu Kristu, anova Mwenga. Muviri waKristu hausati wapedziswa. Vangani vanozviziva izvozvo? Murume nemukadzi chinhu chimwechete. Kristu muviri mumwechete, Shoko. Mwenga anofanira kuva muviri iwowo wese. Vaviri, pamwechete, vanoita muviri mumwechete zvakare. SaAdamu zvaaive pakutanga: murume, nemukadzi wake chinhu chimwechete. Zvino, mukadzi, mwenga wechokwadi, akatengeswa kwaari, kuti asashandise pfungwa dzake. Pfungwa dzemurume, hongu, hurongwa hwake, hurongwa hwake ndiro Shoko rake.
MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PAGENESISI._ JEFF.IN COD CHITATU_ 53-0729
23-76 … Mukadzi asingaremekedzeki ane kodzero dzekurashwa negwaro rekurambwa. Asi murume haangaroore zvakare. Asi anogona kumuramba negwaro rekurambana. Ndizvo chaizvo. Ndizvo zvinotaura maGwaro. Oh, hama, chatinoda husiku hwemibvunzo. Ndizvo chaizvo. Ndiro Bhuku ravaKorinte vekutanga chaputa 14 kana uchida kuverenga nezvazvo. Ndizvo chaizvo. Zvino, izvozvo ... Zvino, mukadzi iyeye ...
Murume ane mvumo yekuramba mukadzi asina rukudzo angadai akaita hupombwe kana kumwe kuita kusakarurama, asi sungano yewanano yavo ichiri yakasungwa, saka murume haakwanisi kuroorazve.
MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PAGENESISI_ JEFF.IN COD CHITATU_ 53-0729
24-78 Mwari, Mwari vakasika munhu, murume nemukadzi. Munoona zvaakaita? Akaita murume. Akaita... Zvino, ndiwo mubvunzo wekutanga (mazviona?); “Akavasika murume nomukadzi” nezvimwe zvakadaro, Genesisi 1:27. Genesisi 2:7 “Jehova Mwari vakaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhuno dzake.
Musiyano ndewei, ndepapi pane kuyanana pamaGwaro ari pamusoro apo? Ndekupi kuyanana kuri pamunhu wekutanga newechipiri?
Munhu wekutanga ndiye munhu wechipiri akaratidzwa ave nepfungwa shanu. Mazviona? Parizvino haukwanisi kubata Mwari nemaoko ako saizvozvo; haukwanisi kuona Mwari. Mwari havana kuzviisa mauri kuti uzvikwanise. Uri...
ZVINOBUDA MUSARUDZO_ CHICAGO.IL MUGOVERA_ 55-1008
E-53 Maiwe,zvangu. Hongu, vakazvisanganisa zvese kunze uko, vakatanga kuwanana, nekuwananisa. Ndiyo nzira yavanozviita nhasi, kana ukatanga kutenderera. Kana ukarasikira mumutsetse wekubata kwaMwari, haungaite zvinhu izvi zvose. Kurooresa vatendi nevasingatendi, mukati nekunze zvichienda zvakadaro, vovarooresa zvakare avo vaive vakambowanikwa kaviri kana katatu uye uyu ane vakadzi vatatu kana vana, nezvimwe zvakadaro, movarooresa zvakare. Ndiyo dzidziso yekare yaBaraamu.
MIBVUNZO NEMHINDURO_ JEFF.I COD SVONDO_ 59-0628E
401-Q-91 parizvino tine rimwe rimwechete zvobva zapera. Regai tione.
91. Hama Bill, ndeupi musiyano wehupombwe (munhu asati awanikwa oita zvebonde) nehupombwe hwekunge munhu awanikwa. Mateo 19:9
Jesu akati kuna Mateo 19:9 “Aninani unorasha mukadzi wake, asi nemhosva yehupombwe, akawana mumwe, unoita vupombwe, nounowana wakarashwa unoita vupombwe.” Musiyano wekuita uku, shoko rekuti upombwe rinoshandiswa pese, asi kuti zvijeke zvaaitaura apa ndezvekuti, mukadzi asati aroorwa haatenderwi kuita zvepabonde haana murume wekuita naye uye wekuitira vupombwe. Kwaari tinoti akasviba. Anofanira kureurura izvi kumurume anoda kumuwana asati awanikwa kana akazviita. Akasataura , murume akazozviziva pamberi, ane mvumo yekumuramba, nekuti akaita sungano yekunyepa. Nekuti Bhaibheri rinoti, “ngazvi ... kana kuti chivanhu chinoti, “ngazvizivikanwe kwamuri (ndinazvo mune rangu) chero vakaroorana vakabatanidzwa neimwe nzira isiri inotenderwa neShoko, wanano yavo haina kukomborerwa. Ndinoti kwamuri mose muchadaira pazuva reKutongwa apo zvakavanzika zvemoyo yese zvichabuda pachena, kana mose muchiziva zvakakunakirai madii mabatanidzwa zviri pamurairo , muri kuzvipupura zvino.” imi muripano. Mazviona here?
Saka hupombwe (fornication) ndizvo zvinoitwa nemusikana, paanorarama zvisina kuchena, ndihwo hupombwe nekuti haana murume. Asi kana akawanikwa, akararama saizvozvo, anenge aitira murume wake hupombwe.
MIBVUNZO NEMHINDURO_ JEFF.IN COD SVONDO_ 62-0527
699-36 … Kune hama munaIshe here, anokwanisa kuroora kana kuroorwazve akava akasununguka, kana akasiya mumwe wake kuti aroorezve?
Kwete. Zvino ngatitorei... titangire pavhesi 10.
Zvino vakawana ndinovaraira, asi handizini, ndiShe, (mazviona?) kuti mukadzi arege kubva kumurume wake: mazviona?
Asi... (kana achibva, ngaagare asingawanikwi, kana ayanane nemurume wake) uye murume ngaasasiye mukadzi wake. (ndiko kuraira kwaMwari. Mazviona?)
Asi kune vamwe vese ndinotaura ini, kwete Mwari .... (Mazviona?) ….. kana hama irinemukadzi asingatendi, …
Zvino, tarirai chinhu ichi. Maona? Munoverenga pachaputa yatangira ino iyi, muchaputa iyoyo yese munoona kuti vaifunga kuti “kana tikawana mukadzi uye aive ... tino ... Ndakaroora ndobva ndava mutendi, mukadzi wangu aive asiri mutendi, regai ndimurashe.” Oh, kwete. Handizvoba. Hamukwanisi kudaro. Muri kuona, mazviona?
… Kana chero hama iine mukadzi asingatendi, uye anofara kugara naye, regai asamurashe. (Hazvisi nekuda kwewanano ; zvinokonzerwa nekusatenda. Kwete kupinda “muwananozve.” garai naye.)
Uye kana mukadzi akaita murume asingatendi, kana achifara kugara naye, regai asamusiye. (Ndizvozvo chaizvo. Mazviona?)
Nekuti murume asingatendi anonatswa nemukadzi wake, nemukadzi asingatendi anonatswawo nemurume wake: kumwe vana vanyu vaisava vakachena asi apa vave vatsvene.
Asi kana asingatendi akaenda, muregei aende ...
Zvino kana asingatendi akati, “Handicharambe ndichigara newe zvachose; wava muKristu.” Ku ... Murume anoudza mukadzi wake, “Nekuti waponeswa, uye wave kubva munezvenyika mataive, ndave kukusiya.” Zvino, hapana chaungaite nezvazvo; murege aende. Mazviona?
MIBVUNZO. NEMHINDURO._ JEFF.IN COD SVONDO_ 62-0527
700-40 Kana kuti mukadzi anoti kumurume wake, “Handingasangane nevanhu vatsvene ava. Handingaiti izvi. Ndakubva kwauri ndiende.” Usasiye kereke, musiye aende. Mazviona?
Hama haisi pahusungwa panyaya dzakaita saidzodzo, ndokunge, kana mumwe wako achikusiya achida kubva nekuda kweizvi. Haungarambe wakabatira kwaari. Kana achida kukusiya uye vachikusiira chikonzero chaKristu, varege vaende. Asi haungapinde muwanano zvakare. “Asi Mwari akatidaidza kurugare.” Mazviona? Zvino, kwete kuti unokwanisa kupinda muwanano zvakare; akatotaura izvi, asi haungagare nemukadzi kana murume asingatendi kana iye asingade.
700-42 Kana vachida , itii, “Zvino, moenda kukereke. Zvino, kana muchida kuenda pasi uko, zvava zvenyu. Kana muchida kuenda kukereke kwenyu endai mberi. Ini zvangu, handizvitendi. Uye ndingaite chero chinhu kwamuri; handingakudzivisii, endai mberi,” zvino mozosara ipapo, muchiziva kuti hahusi hupenyu hwenyu hwakanatswa huchanatsa mutendi iyeye, kana kumuita kuti atende. Mazviona? Mativi ese murume kana mukadzi ... Mazviona?
Asi zvino kuti ndingotaurawo, “Ini... Hama Branham, ndakaroora uye mukadzi wangu haasi mutendi, uye pane avo sisi vandingaroore. Ndichasiya uyu ndoroora uyo.” Oh kwete. Kwete, pachokwadi. Sungano yenyu ndeyekusvika parufu kana mukasiyana, hakuna chimwe chinhu panyika chinokutendera kuti uwane kana kuwanikwa zvakare chiri muBhaibheri kunze kwekunge umwe wako afa. Ndizvo chaizvo. Chinhu chimwechete ... hakuna kupinda muwanano zvakare kunze kwekunge wafirwa nemudiwa wako. Ndizvo zvega. Mazvionaka?
700-44 Haungazviite kuti zvirwisane. Saka chingoverenga mavhesi ekutanga neanotevera acho, unozobata kuti ari kutaura nezvei. Zvino, zvinoreva pano, kwete... mazviona?
Izvi zvinoreva here kuti hama munaShe dzinotenderwa kuwana nekuwanikwazve?
Kwete, baba. Mazviona, akazvitsanangura pakutanga. Maona:
… Kune vakawana ndinovaraira asi handizini, ndiShe, kuti mukadzi arege kubva kumurume wake: kana achibva ngaagare asingawanikwi, kana ayanane nomurume wake ... (mazviona?)
Hakuna chinhu chakadaro semutendi akagadziriswa kunonowana zvakare, iye aine mudiwa wake achiri mupenyu.
MIBVUNZO NEMHINDURO. 2_ JEFF.IN COD SVONDO_ 64-0823E
1037-197 Naizvozvo .... iwe musikana kana ukatsidza kuti uchawanikwa nemukomana uyu, unofanira kuita saizvozvo. Kana ukawanikwa neumwe kumashure kwechitsidzo ichocho, onozo- kubva zvino zvichienda mberi- unenge uchirarama muhupombwe. Tarirai, chinhu chimwe kumukomana kana akavimbisa kuwana musiKana ...
Usaite chivimbiso kune chero munhu ' kunze kwekunge uchizochizadzisa. Rangarira kuti Bhaibheri riripo kumira nacho. Josefa akavimbisa kuroora Maria. Mwari akati ndizvo zvichaitika ...
Verenga murairo weTestamende yekare pamusoro paizvozvo. Maona? Murairo weTestamente yekare, kana ukavimbisa kuwana mukadzi, iwe woroora mumwe, waive uchiita upombwe; zvaikuita kuti urasirwe kunze kwemasuwo eguta. Hongu, baba. Munofanira kuchengetedza zvivimbiso zvenyu kana ukavimbisa mukadzi izvozvo. Mudziyo wakakosha unoera, uye ndiye anounza hupenyu hwemwana panyika zvakare. Saka kana ukamuvimbisa, unotofanira kumuroora.
MIBVUNZO NEMHINDURO._ JEFF.IN COD SVONDO- 62-0527
698-Q-169 169. Zvino, VaKorinte vekutanga chaputa 7 vhesi 15. Zvino mubunzo wavakabvunza: Hama Branham, izvi zvinoreva here kuti vana baba nanaamai vakasununguka kuroora nekuroorwazve?
Kwete. Tarirai, hamunzwisisi mubvunzo wake ipapo pamwechete nezvaanotaura. Havana kusununguka. Tarirai, zvingaite kurwisana nemaGwaro, asi maGwaro haazvirwisi zvachose.
VAHEBHERU. CHAPUTA 6. 2_ JEFF.IN HEB SVONDO_ 57-0908E
305 Ndinokwanisa kubuda ndoenda, ndichitenderera nenyika, ndosiya mudzimai wangu achiita sekunge akufa nenzara, kana nechimwewo chinhu, kana kurega vana vachirarama vasina chekudya; tichiri takaroorana. Kana akandiramba, ndinenge ndichiri ndakaroora, nekuti ndichiri nehupenyu mumuviri mangu. Ndakaita sungano iyoyo, “Kusvikira taparadzaniswa nerufu.” Ndizvo chaizvo. Tichiri takaroorana. Asi, zve, ndiri kuita murume akaipa. Iye anokwanisa kuitawo mukadzi akaipa. Saka kana tichidanana, tinogara pamwechete tosenga mutoro, tiri pamwechete.
KUWADZANA_ MIDDLETOWN.OH MUGOVERA_ 60-0611B
E-18 … Haukwanisi kuva wakaroora kana kuroorwa pasina chibvumirano. Haukwanisa kuita mukadzi pasina kuwirirana. Uye kuwirirana ikoko kunosimbiswa nesungano yenyu.
Haukwanisi kuwadzana naMwari usina kuita wirirano naMwari. Uye kune chinhu chikuru pakuwadzana naMwari, iRopa, Ropa chete. Yaive nzira yaMwari kubva pakutanga, zvichave kusvikira pakupedzisira. Mukana wekuwadzana naMwari wega uripo kupfurikidza Ropa.
RUZHA RWUSINA KUGADZIKIKA_ JEFF.IN V-26 N-19 SVONDO_ 55-0731
80 Chinhu chekutanga chaunoziva, kana paine chimwe chinhu chamubata. Anobva atanga kuyevedzwa nevamwe varume. Nei, nekuti murume anoyevedza. Anoyevedza kukunda murume wake. Chimwe chinhu chinobva chaitika maari, anobva anzwa kuti anoda murume uyu.
Zvino, terera. Mukati kati memweya wake, Shoko raMwari rinotanga kukwatamo, roti, “Uri kutadza. Sungano yako ndeyekuti uchagara nemurume uyu kusvikira maparadzaniswa nerufu, zvisinei nekuti anotaridzika sei.”
HUMWECHETE_ JEFF.IN V-10 N-2 SVONDO_ 62-0211
18 Sezvazvinoita kana ukasunganidzwa nemurume wako, mukadzi akasunganidzwa nemurume wake, isungano kusvikira pakufa. Zvino kana ukasungana naMwari, ndicho chinhu chimwe apo kereke inosungana naKristu, inonzi kusvikira rufu rwatiparadzanisa. Kana usina kuita zvivi kana chero chinhu chakaipa, unozobatanidzwa naMwari nekusingaperi. Rufu rwega ndirwo rwungakubvise kunaMwari, kwete rufu rwenyama, asi chivi cherufu. Chivi rufu; ichocho ndicho chinokubvisa kuna Mwari. Saka kuti uve pamwechete naMwari muMweya wesimba rake hupenyu husingaperi; wakasunganidzwa naMwari nekusingaperi. Ndoda kusvika pane izvozvo pashure pezvimwe zvishoma zvandichataura. Kusunganidzwa nekusingaperi naMwari asingagume, uri pakuwadzana kwakakwana naye, makasunganidzwa zvakanakisa naye, kereke, vese Mwari nekereke chinhu chimwechete, chakabatana pamwechete.
KUSARUDZA MUKADZI, MWENGA_ LA.CA V-2 N-28 SVONDO_ 65-0429E
46 Zvino, kana zvemweya kana kuti ... Zvakasikwa zvikaita rudzi rwezvemweya. Kusarudzwa kweMwenga, mune zvakasikwa, zvinova rudzi rwekutsvaga Mwenga, Mwenga, mune zvemweya.
47 Chinhu chakakosha kana tasvika pakusarudza mukadzi, nekuti sungano pano inoti kusvikira rufu rwatiparadzanisa. Ndizvo zvatinofanira kuchengeta. Uye munoita sungano iyi pamberi paMwari, kuti rufu rwega ndirwo rwuchakuparadzanisai ...
KUSARUDZA MUKADZI _ LA.CA V-2 N-28 CHINA_ 65-0429E
51 Kana tikadzidza zvatiri kuita kana takuda kuroorana, patinosarudza mukadzi wedu, kana kuti murume wedu, kana tikazvidzidza zvese! Murume anofanira kunamata zvakasimba, nekuti anokwanisa kuparadza hupenyu hwake hwese. Rangarirai, sungano inoti “Kusvika taparadzaniswa nerufu,” saka anokwanisa kuparadza hupenyu hwake nekuita sarudzo isiri iyo. Asi kana achiita achiziva, akaita sarudzo yakaipa achiroora mukadzi asina kukodzera kuva mukadzi wake, asi oenderera mberi nekumuroora, zvino imhosva yake. Kana mukadzi akatorawo murume achiziva kuti haana kukodzera kuva murume kwaari, imhosva yakewo, kana ukaziva chakanaka nechakaipa. Saka, haufaniri kuzviita kusvikira wanyatsonamata nezvazvo.
TAKAVONA NYEREDZI YAKE TAUYA KUZOMUNAMATA_ TUCSON.AZ V-13 N-8 MUVHURO_ 63-1216
6 Zvino ndakutaura izvi ndisati ndaenda kure. “Kutenderana nemukadzi” kumabvazuva zvaive zvakafanana nekuroorana, uye nekuvimbisana. Mushure mekunge vaziviswa, vaive vatowanana. Kana sungano inoyera yaitwa pakati pavo, verengai Deuteronomio 22:23 munoona kuti murume nemukadzi uyu vakatenderana kuwanana (asi havana kuita sungano kwemwaka yakati kuti), kana vakaputsa kutenderana uku vane mhosva yehupombwe. Ndizvo chaizvo. Kana vakatenderana vannge vakangofanana nevakaroorana. Murairo hausati wavapa mvumo yekuti vagare vese semurume nemukadzi asi pamberi paMwari, kana vakavimbisana, mazwi avo akatosungwa muhushe hwaMwari. Vakaputsa izvi vanenge vapara mhosva yehupombwe. Zvino Josefa aive “akavimbisa” kuroora Maria. Kana Hama vashumiri, kana mukadzidza izvi zvakanakisa zvinokujekeserai zvakanakisa panyaya iyi yekuwanana nekurambana yakaomarara uye yakasiyana pakati pevanhu nhasi uno. Zvino tarirai Josefa, murume wake, semunhu akarurama, tarirai, zvino tinoona kuti hazvingaputswe.
MIBVUNZO NEMHINDURO 2._ JEFF.IN COD SVONDO_ 64-0823E
1036-Q-313 313. Hama Branham, kuti muchato wakagurwa, hauchashandi zvinorevei? Vanhu vakasununguka kuroorana here kana kuti ingori imwe nzira yekuti kurambana? Ndinoda kunzwa nekunzwisisa pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi vakaroorana. Kana vakangoita chirangano ichocho vakatoroorana. Zvakangofanana nemukomana, kana mukomana akavimbisa musikana kuti achamuroora, akatosungirirwa kumusikana iyeye. Zvakangofanana nekunge atomuroora. Chinhu chimwe chinoitwa nemurairo, kukupai gwaro rekugara mese kukuitai murume nemukadzi pamurawo. Asi kana murume akaudza mukadzi kuti, “Ndichakuroora, mudiwa; ndichakuita mudzimai wangu. Unoda here ...” atowana uyo.
Chitsidzo chako chinoera; ndizvo zvaita kuti uroore. Hakuna muparidzi angakuchatisai, kana mejasitiriti, kana chimwe chinhu; chivimbiso chako kuna Mwari nekune murume uyu. Kana ukavimbisa, watove muwanano.
1036-Q-313 Tarira. Wati , “Hama Branham, ndizvo here ....? Makati ... Makati muchadaira izvi neBhaibheri chete.” Munoda Bhaibheri pazviri here ...
“Josefa, murume wake, zvaaive munhu akarurama (murume wake wechivimbiso, akanga atodaidzwa kuti murume wake) ... Josefa, murume wake, zvaaive munhu akarurama, 'wakafunga' kumurega chinyararire; asi vasati vasangana, wakavonekwa wava nemimba noMweya Mutsvene. Mazviona? Mutumwa waMwari wakazviratidza kwaari akati, “Josefa mwanakomana waDavidi usatya kutora Maria, mukadzi wako.” vaive vatowanana nekuti aive atovimbisa kwaari.
1037-196 Zvakadaro musikana, kana ukavimbisa kuwanikwa nemukomana uyu, wakazvisunga kuita saizvozvo. Kana ukaroorwa neumwe mumashure mevimbiso iyoyo, kubva ipapo zvisinei- unenge worarama muhupombwe. Tarirai, zvimwechete kumukomana anovimbisa kuwana musikana...
Usaite vimbiso kune chero munhu 'kunyanya kana usingarevi kuti uchazviita. Rangarirai Bhaibheri ririko kune zvinhu zvakadaro. Josefa akavimbisa kuwana Maria. Mwari akati zvichave zakadaro.
Verengai murairo weTestamente yekare pane izvi. Mazviona? Murairo weTestamente yekare, kana ukavimbisa kuroora mukadzi, woroora umwewo, waiive uchiita hupombwe; vaikukandira kunze kwemasuwo eguta. Hongu, baba. Unofanira kuchengetedza chivimbiso chako kana ukavimbisa mukadzi saizvozvo. Mudziyo wakakosha, unounza vana panyika zvakare. Saka kana ukamuvimbisa, uofanira kumuroora.
MIBVUNZO NEMHINDURO .3 _ JEFF.IN COD SUNDAY_ 64-0830M
1095-156 Mubvunzo wakabvunzwa rimwe remazuva, “kugurwa kwemuchato - kugurwa kwemuchato kumwechete here nekurambana?” Mazviona? Kana mukandibvunza mibvunzo iyoyo, vadikani, hamuzivi kuti zvinondiita sei. Ndine vadikani vangu muno vakaroora nekuroorwa kaviri kana katatu. Muri kuziva here kuti ndiri kutotaura nemwanakomana wangu, Billy Paul? Ndingamurega here Billy Paul ? Kwete hazviiti. Billy akaona mumwe musikana, akauya akati, “Baba, ndakuda kuroora.”
Ndaigeza motokari yangu; ndikati, “rovera musoro wako kumadziro,” ndikaramba ndichigeza motokari yangu saizvozvo.
Akati, “Ndiri kuda kuroora.”
Ndakati, Oh, enda mberi mwanangu,” ndikaramba ndichiita zvandaiita. Akaenda akanoudza amai vake amai vake vakamuseka. Munoziva kuti akaita sei? Akamhanyidzana nekamwe kamwana kechikoro akaroora. Takagurisa muchato wacho, baba vemusikana neni. Takagurisa muchato asi vaive vakangoroorana. Mwana wangu akagara pano akanditeerera nhasi uno. Ndizvo chaizvo.
Akauya kwandiri nemusikana waari kugara naye parizvino, muroora wangu. Muzukuru komana wangu muduku ... Akauya akati, “Baba mungandiroorese here?”
Ndakati, “hazvigoni.” Mwanakomana wangu iyeye. Munofunga kuti hazvindirwadzi kana ndikamuisa mumaoko mangu ndikaita zvese zvandinogona, uye ndaive baba uye amai kwaari? Munofunga here kuti hazvindiuraye kuti nditaure izvozvo? Asi ndicho chokwadi. Chokwadi chaicho. Mwanakomana wangu agere pano akateerera kwandiri ... Muroora wangu nemuzukuru wangu vakagara pano izvozvi... Asi ndakamuudza kuti zvakaipa (Mazviona?), nekuti ndinofanira kumuudza. Ndakasungwa neShoko pabasa iroro.
MIBVUNZO NEMHINDURO. 3 _ JEFF.IN COD SVONDO_ 64-0830M
1096-160 Ndakati, wakachatiswa mamejasitiritika? Waifanira kuchatiswa mukereke nemushumiri. Ndicho chinhu chakanaka kuitwa nemuKristu. Asi nekuti wakatoita chivimbiso ichi kare, ukaita sungano, ukaroora makore makumi maviri nerimwe adarika, ndofunga zvakanaka.
“Munoti, zvakanaka ini ....”
Mubvunzo unokwanisa kuva unoti, “Ndingauye ndikachatiswazve here?” Kana uchida. Kana usina chinhu mupfungwa dzako chinoedza kutenda kwako, 'nekuti kana pari nechimwe chinhu pano, haungaende mberi asi ipapo pauri. Kana mubvunzo uyu ukauya, kuti unogumirepi, ipapo. Asi ini, zvinenge zvisina kuita zvakanaka.
Murume akandibhabhatidza muzita raShe Jesu Kristu akazondidzinga mukereke, nekuti ndaisatenderana naye pavaparidzi vechikadzi. Hazvina kundiita kuti ndibhabhatidzwe zvekare. Mazviona? Chokwadi hazvina. Mazviona? Ndizvo chaizvo.
MIBVUNZO NEMHINDURO. 3. _ JEFF.IN COD SVONDO_ 64-0830M
1097-165 Ndinenge ndatove mutadzi kana mwanakomana wangu akagara pano akavimbisa musikana, ini ndoti ... kana asina kubvira aitirwa mhemberero, kana kugara nemukadzi wacho, kana kurara nemusikana wacho, kana chii chazvingave, paakaita chivimbiso ichocho, akatoroora Billy Paul kana pasina Billy Paul. Ndicho chokwadi chaicho. Akatoroora paakaita chivimbiso ichocho. Kana ndirini, zvimwechete.
1095-Q-342 342. Taka- takaroorana makore 21 adarika nekuyananiswa kwerunyararo. Zvaive zakaipa here?
Hongu, zvaive zvakaipa kuita izvozvo. Kuwanana ndekwemumba maMwari. Asi nekuti makatoroorana, pano ndipo paunonyatsochatiswa: makatoroorana pamakatsidzirana nekuvimbisana kuti muchazotorana . Kuyananiswa kwerugare kunongokupai pepa; rinongova kuratidza kuti muri kugara mese zviri pamutemo semurume nemukadzi kwete kungovawo murume nemukadzi nje. Asi kana ukavimbisa musikana uyu uchivimbisa murume iyeye kuti uchararama pachokwadi kwaari, womutora kuti ave murume wako, matoroorana ipapo. Kana mucharangarira ndakatsanangura izvi svondo rakapera , ndinotenda ndizvo. Mazviona? Kana ukamuvimbisa... Mazviona?
Kunyange kare - muBhaibheri, kana murume akavimbisa musikana, iye ... munoziva murairo uripo pane izvozvo. Nei, zvaive zvimwechete nehupombwe. Zvaitove zvimwe, kana akavimbisa, zvaive izvozvo.
MUTAMBO WEMUCHATO _ JEFF.IN MUGOVERA_ 65-0220X
E-4 Mwari Baba, Musiki mukuru wezvinhu zvose, Muvambi weHupenyu husingagumi, Mupi wezvipo zvose zvakanaka, makaona zvakakodzera kuti mupe munhu chipo, Mukamupa mukadzi. Zvakanyorwa, “Uyo awana mukadzi, awana chinhu chakanaka.” zvatakamira masikati ano, kwapera zvuru zvemakore zvizhingi, pfungwa dzedu dzadzoswa kunguva yakaitwa mhemberero dzekutanga, Ndimi Baba makadziita mubindu reEdheni, pamakabatanidza baba vedu naamai vedu, Adamu naEva, nanhasi munhu achiri kuzviwanira mudzimai.
Baba, tinonamata kuti muchakomborera murume nemukadzi vechidiki ava, vakawana rudo mumoyo yavo kuumwe neumwe wavo. Munguva yakaipa yatiri kurarama zvino, kurambana kwawandisa, kuparadzana mudzimba. Itai zvisava pavaviri ava. Itai varangarire sungano iyi chero vachiri kurarama! Ngakusava nemasimba angavapatsanura! Ndonamata kwamuri Baba, sezvamakakomborera Isaka naRabheka, mukavapa mufaro muhupenyu hwavo hwese, vakabereka, .... tonamata kuti muchaitawo zvimwechetezvo kune ava vaviri, vakatenderana pachinhu ichi vakachitaura pachivande, zvino vauya kukereke kune vamwe, kuzopira sungano yavo kune umwe neumwe wavo, vakazviita vakazvishambadza paruzhinji.
1100-181 Asi zvino panyaya yekuwanana nekurambana,...
Kumashure kwekuita sungano yavo kune umwe neumwe wavo, rufu rwega ndirwo rwuchavaparadzanisa, vanombundirana, votsvodana, votendeuka vofamba vachinyemwerera. Akati, “Ndokumbirawo kanguvana.” “ Ndiri kutsva kuda kuziva; ndiri mutorwa.” Akati, “muri kuroorana?”
Akati, “Kwete.” “Tave nemakore makumi mana takarooraa.” akati, “Takaroorana pano paatari makore makumi mana adarika, gore rega rega tinodzoka kuzoita sungano yedu zvekare.” Ipfungwa yakanaka. Maziona?
Asi kana muchinge mangoroorana, kana ukamuvimbisa, anobata shoko rako; iwe wobata rake; Mwari votobata mashoko enyu mese.
KUSARUDZA MUKADZI _ LA.CA V- 2 N-28 CHINA_ 65-0429E
46 Zvino kana zvemweya kana kuti ... Zvemasikirwo zvikaita rudzi rwezvemweya. Zvino, kusarudza kwemwenga, mumasikirwo, rudzi rwekusarudza Mwenga, Mwenga, mune zvemweya.
47 Zvino, chinhu chakakosha kana tasvika pakutsvaga mukadzi, murume, nekuti sungano iri pano ndeyekuti kusvikira rufu rwatiparadzanisa. Ndizvo zvatinofanira kuzvichengeta zviri. Uye unoita sungano iyi pamberi paMwari, kuti rufu rwega ndirwo rwuchatiparadzanisa.
46 Zvino, kana zvepamweya kana kuti .... Zvemasikirwo zviri rudzi rwezvemweya. Kusarudza mwenga, mune zvemasikirwo, rudzi rwekusarudza Mwenga, Mwenga, mune zvemweya.
47 Zvino, chinhu chakakosha kana taenda kunosarudza mukadzi, kana murume, nekuti tinovimbisa kuti kusvikira rufu rwatiparadzanisa. Ndizvo zvatinofanira kuzvichengeta zviri. Uye munoita sungano iyi pamberi paMwari, kuti rufu rwega ndirwo rwuchakuparadzanisai.
KUSARUDZA MUKADZI. _ LA.CA V-2 N-28 CHINA_ 65-0429E
51 Kana tikadzidza zvatinenge tichiita patinoroorana, patinosarudza vakadzi vedu kana varume vedu, kana tikazvidzidza kwazvo! Murume anofanira kunamata zvakadzama, nekuti angaparadze hupenyu hwake hwese. Rangarirai, sungano ndeyekuti “kusvika taparadzaniswa nerufu,” saka anokwanisa kuparadza hupenyu hwake nekuita sarudzo isiri iyo. Asi kana achiziva kuti , ari kuita sarudzo yakaipa achiroora mukadzi asina kukodzera kuva mukadzi wake, ongoroora zvakadaro, inenge iri mhaka yake. Kana mukadzi akatora murume achiziva kuti haana kukodzera kuva murume wake, inenge iri mhaka yakewo, kumashure kwekuziva chakanaka nechakaipa. Saka unofanira kuzozviita wanyatsonamata zvakadzama.
KUCHENGETEDZA _ SHREVEPORT.LA MUGOVERA_ 62-1124B
… Akati, “Enda uuye kuno nemurume wako.”
Zvakamushamisa. Akati, “handina murume.” Tarirai, anorarama musangano rinoti, regai varoore nekuroorana nekuita zvimwe zvese, nekuroorazve, uye ... Maona? Akati, “handina murume.”
88 Doc akati, “Zvakanaka mukoma wangu muparidzi, anokwanisa kukuchatisai.” Akati, “Haabhadharisi vanhu kuita zvinhu zvakaita saizvozvo.”
Akati, “ndokumbira umubvunze kuti angandichatise here?”
89 Zvakanaka, husiku ihwohwo munin'ina wangu akandibvunza. Ndikati, “Kana asina kubvira aroora, kana kuti umwe wavo kuroorwa, uye zvinhu zvavo zvese zvakanaka.” Iye akati, “Zvakanakai ,ndichamubvunza.” Ini ndikati, “ Kana zvakanaka, muudze, auye.”
MAMBOKADZI WESHEBHA_ TIFTON.GA SVONDO_ 60-0110
E-26 … Makaona here zvavakataura, “Baba, tinoda chiratidzo chenyu.” Zvino, teererai kwaari. Kana chimwe chinhu chikavabata, vanoisa kuipa nekushata, rudzi rwunopomba ndirwo rwunotsvaga chiratidzo. Kana chiporofita ichi chakambozadziswa chiri kuzadzisika mazuva atiri kurarama ano. Takamboita rinhi rudzi rwakaipa rwunoita upombwe? Makoti ekurambana azere kuwanana nekurambana, kuroora nekuroorwa, Jesu akataura kuti zvichange zvakadaro. Vanhu vakaipa, vasakarurama, vakaita nguva ina kana shanu dzakasiyana, vachisiya vakadzi vachiroora vamwe, vachisiya varume vachiwanikwa nevamwe. Sezvinoita ... Kutokunda mhuka. Rwakavepo riniko rudzi rwakaipa runopomba?
KUROORANA NEKURAMBANA_ JEFF.IN V-3 N-13 SVONDO_ 65-0221M
57 Gwaro iri, mubvunzo uyu, wakauya kuna Jesu pakutanga chaipo kwekushumira kwake. Ukauya kuna Mosesi pakutanga chaipo kwehushumiri hwake. Ndiwo mubvunzo uri pamusoro pemoyo yevatendi. Vasingatendi havana basa nazvo. Asi uri kuvatendi, nekuti vatendi vari kuedza kuita zvose zvakanaka kuti vave vakarurama pamberi paMwari. Nekudaro, chero mubvunzo unouya pachitendero, nyaya yekuroorana nekurambana inobva yauyawo, (nei?) nekuti ndiyo yakakonzera chivi chekutanga. Ndipo pakatangira chivi. Ndicho chikonzero nei inotaurwa nguva dzese, nekuti ndiyo mavambo ezvivi.
HUPENYU HWAKO HWAKAKWANIRA KUEVANGERI HERE _ JEFF.IN V-5 N-5 SVONDO_ 63-0630E
141 Kana uchiti, “Ndiri nhengo yekereke yakanaka.” hazvina kana chimwe chekuita nezvazvo.
Ndinoziva vasingatendi. Pasi kuAfrica, pakati pehama dzangu ikoko, ndinowana hunhu hwevanhu ikoko huri pamusoro kukunda zvikamu makumi mapfumbamwe evanhu vekuno kuAmerica. Nei, kune mamwe marudzi ikoko, kana musikana ... Akabva awanikwa, anotariswa kuti achiri mhandara here. Kana akaputsa humhandara hwake, anofanira kutaura kuti ndiyani akazviita. Vanobva vavauraya vose, pamwechete. Hakungaiti kuuraya kuzhinji here muno muAmerica kana izvi zvikatanga kuitwa? [Ungano inoti, “Amen.” Ed.] asi munovati vahedheni? Amai, weee! Vanokwanisa kuuya kuzodzidzisa vanhu, vanozviti vanhu vemukereke, kuti kurarama vari vatsvene kunoitwa sei. Ndizvo chaizvo.
MIBVUNZO NEMHINDURO_ JEFF.IN COD SVONDO_ 59-0628E
40-187 Mukadzi akauya, kwete kare kare, akati, “Oh, ndakareurura zvose izvozvo.” Aitya uye ari panguva yakaoma, akati, “Ndakareurura zvose izvozvo kuna Mwari.”
Ndakati kwaari, “unofanira kuzvireurura kumurume wako. Havasi Mwari vawakaitira hupombwe; wakaitira murume wako.” Ndizvo chaizvo.
Kana murume akaroora mukadzi akanga achirarama zvisina kuchena asati aroorana naye, ouya kwaari, kana vaive vakaroorana kwenguva refu, akauya kumurume wake akati, “Mudiwa, ndoda kukuudza chimwe chinhu. Ndakambodana neumwe murume; handina kubvira ndakuudza,” Jesu akati ane mvumo yekumurasha achiroora umwe nekuti havana kuroorana pakutanga,' nekuti akataura manyepo kwaari.
KUBATANIDZWA KUSINGAONEKWE NEMESO EDU KWEMUKADZI WAKRISTU _SHP.LA V-2 N-15 SVONDO_ 65-1125
83 Ndaida kureva zvinhu zvitatu ipapo zvaasingafaniri kubva pazviri. Zvino, ndave kutaura, fungai nezvekereke pandichange ndichitaura nezvemukadzi akaberekwa, sezvo Pauro ari pano, muchaputa yechinomwe yaVaRoma.
84 Ane kuvimba kunoera kwakaitwa kwaari naShe wake, chimwe chinhu chakakosha. Hapana chimwe chinhu chinacho kunze kwemukadzi. Ndizvoka. Chakaiswa kwaari naMwari. Haafaniri kuputsa chinhu ichi. [humhandara hwake]
85 Kana akaita chinhu chakaipa, anofanira kuchireurura kumurume wake vasati vagara vese, vozvigadzirisa. Zakafanana nekereke yakawaniswa nemurairo, inofanirawo kuuya pamberi paKristu isati yawanikwa kuwanano yechipiri. Anofanira kureurura izvozvo. Kana akasadaro, ogara nemurume wake kwemakore gumi oreurura, ane mvumo yekumurasha owana mumwe mukadzi. Ndizvo zvinotaura maGwaro. Hupombwe kurarama kusina kuchena.
86 “Josefa, usatya, kutora Maria mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.” aifunga kumusiya chinyararire, tarirai, kwaive kumashure kwekunge atomuvimbisa kare. Kana watsidzirana naye, pamberi paMwari, wakatowanana naye.
Saka chitsidzo chako, mumaziso aMwari, chitsidzo chekusunga kunyangwe musingakwanisi kugara mese musati maroorana zviri paMurairo. Muchato ndiyo nguva apo vanhu vanokupai mvumo yekugara mese.